Porn တွင်သင့်ဦးနှောက် - ဤဆိုက်ကိုအကြောင်း
လူတိုင်း၏အမြင်ကိုကြိုဆိုသော်လည်းဤ site သည်လောက (ဘုရားမဲ့ဝါဒီ Gary Wilson မှတည်ထောင်သည်) သည်လောကဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်အဓိကအားဖြင့်သိပ္ပံနည်းကျအခြေခံသည်။ ညစ်ညမ်းခြင်းကိုတားမြစ်ရန်ဤနေရာတွင်မည်သူမျှမကြိုးစားပါ။ ဤသည်မှာစီးပွားဖြစ်ဆိုဒ်တစ်ခုမဟုတ်ပါ။ ကျွန်ုပ်တို့သည်ကြော်ငြာများ၊ လှူဒါန်းမှုများနှင့်လက်ခံခြင်းမှရရှိသောကြော်ငြာများကိုလက်ခံခြင်းမရှိပါ အဆိုပါ YBOP စာအုပ် porn ၏သက်ရောက်မှုများနှင့် ပတ်သက်၍ ပညာရေးနှင့်သုတေသနများကိုမြှင့်တင်သောယူကေတွင်မှတ်ပုံတင်ထားသောပရဟိတလုပ်ငန်းသို့သွားပါ။ ဂယ်ရီ Wilson သည်စကားပြောရန်အခကြေးငွေမယူကျွန်ုပ်တို့အကြောင်း).
ကျနော်တို့လူတွေမိမိတို့ခွအေနမြေားကိုတိုးတက်အောင်အရေးပါသတင်းအချက်အလက်အားနည်းနေရိုးရှင်းစွာဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့မလိုအပ်ဘဲခံစားနေရပြီးမကြိုက်ဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့ကျနော်တို့ site ကိုဖန်တီးခဲ့တယ်။ သင့်ရဲ့အခြေအနေတိကျတဲ့ YBOP စီမံခနျ့ခှဲသူမေးခွန်းများကိုမမေးကြဘူးပါ။ YBOP ဆေးဘက်သို့မဟုတ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအကွံဉာဏျရှာဖွေရေးမှာသို့မဟုတ်ပေးမထားဘူး။
ဤ site ကဦးနှောက်-အထီးသို့မဟုတ်အမျိုးသမီးအပေါ်ညစ်ညမ်းရဲ့သက်ရောက်မှုအပေါ်အာရုံစိုက်။ ဒီအများစုအထီးစိန်ခေါ်မှု (နှင့် Self-အစီရင်ခံစာများယောက်ျားကနေအများစုဖြစ်ကြသည်) ခဲ့ကတည်းကသို့သော်အဆိုပါ site ကိုတစ်ဦးအဓိပ္ပါယ်အထီး slant ရှိပါတယ်။ သို့သော်စွဲစွဲလမ်းဖြစ်တယ်, ပိုပြီးအမျိုးသမီးကအင်တာနက်ညစ်ညမ်းပြဿနာများအစီရင်ခံရန်စတင်နေကြသည်။ သငျသညျအမြိုးသမီးဖြစ်ကြလျှင်, သင်မြင်ချင်စေခြင်းငှါ အမြိုးသမီးမြားကိုအထူးစိတ်ဝင်စားမှုများ၏ဆောင်းပါးများ.
ပြန်လည်နာလန်ထူရန် ချဉ်းကပ်နည်းတစ်ခုတည်းသာ ရှိသည်ကို ကျွန်ုပ်တို့ မယုံပါ။ မည်သို့ပင်ဖြစ်စေ ကျွန်ုပ်တို့၊ အမျိုးမျိုးသောအကြံပြုချက်များကိုမျှဝေပါ။ အခြားသူတွေမိုးသည်းထန်စွာ porn ကိုအသုံးပြုခြင်း၏မလိုချင်တဲ့သက်ရောက်မှုပြောင်းပြန်ရှိသည်ဟုမည်သို့အဖြစ်။
ယနေ့ခေတ်အလွန်အမင်းအင်တာနက်ညစ်ညမ်းများသည် ဦးနှောက်ကိုမည်သို့ပြောင်းလဲစေနိုင်သည်ကို ဤဝဘ်ဆိုက်က သင့်အား အတိအကျနားလည်ရန် ကူညီပေးပါမည်။ ထိုအသိပညာကို လက်နက်ကိုင်ဆောင်ထားပြီး၊ သင့်ဦးနှောက်ရှိ မူလပတ်လမ်းအချို့သည် သင့်အား ညစ်ညမ်းဆီသို့ တွန်းပို့သည့်အခါ ယင်း၏အလုပ်ကို လုပ်ဆောင်ရန် ကြိုးစားနေကြောင်း သင်သဘောပေါက်မည်ဖြစ်သည်။ သင့်လက်ကျန်ငွေကို ပြန်လည်ရယူရန်အတွက် ၎င်းကို ထက်မြက်အောင်ပြုလုပ်ရန် လိုအပ်ကြောင်း သင်တွေ့ရပါမည်။
ဤဆိုက်သည် ဦးနှောက်အပေါ် လိင်ဆက်ဆံခြင်းဆိုင်ရာ အကျိုးသက်ရောက်မှုများအပေါ် နှစ် 20 ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာချက်နှင့် ညစ်ညမ်းစွဲလမ်းသူများ ပြန်လည်ကောင်းမွန်လာစေရန် နားထောင်ခြင်း ဆယ်စုနှစ်တစ်ခုကျော်ကြာမှ ကြီးပြင်းလာခြင်းဖြစ်သည်။ ညစ်ညမ်းရုပ်ရှင်များ၏ ဦးနှောက်အပေါ် သက်ရောက်မှုများနှင့် ပတ်သက်၍ အလွန်အရေးကြီးသော အချက်အလက်လစ်ဟာနေသည်။ ညစ်ညမ်းအသုံးကို အကျင့်ပျက်တယ်လို့မြင်တဲ့ လူတွေကြားထဲမှာ တည်ရှိနေတဲ့ ပင်လယ်ကွေ့ထဲမှာ ပျောက်ဆုံးနေပြီး အင်တာနက် ညစ်ညမ်းကို ဖေဖေနဲ့မတူဘဲ မြင်တဲ့ ခေတ်ရေစီးကြောင်းမှာ Playboy မဂ္ဂဇင်းများ။
ကျွန်ုပ်တို့၏အမြင်တွင်၊ ညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုသည် ကိုယ်ကျင့်တရားဆိုင်ရာပြဿနာမဟုတ်ပါ (သရုပ်ဆောင်များကို ခေါင်းပုံဖြတ်ခြင်းနှင့် လိင်ကုန်ကူးခြင်းတို့သည် ဖြစ်သော်လည်း)။ သို့တိုင်၊ လူ့ဦးနှောက်အတွက်၊ Internet porn သည် "Fortnite" သည် checkers မှဖြစ်သောကြောင့် erotic မဂ္ဂဇင်းများနှင့်မတူပါ။ ဒီစွမ်းရည်က ထူးခြားတယ်။ supernormal လှုံ့ဆော်မှု ဦးနှောက်ကိုပြောင်းလဲပစ်ရန်အထူးသဖြင့် (အသုံးပြုသူများအတွက်အဓိကသက်ရောက်မှုရှိပါတယ် မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်စဉ်အတွင်း).
ဆိုက်တွင် မည်သည့်နေရာတွင်မဆို စတင်နိုင်သော်လည်း သင်၏အခက်အခဲကို နားလည်ရန် အရေးကြီးပါသည်။ အခြေခံအချက်အလက်များကိုရယူရန်၊ ကြည့်ရှုပါ။ Porn PowerPoint တင်ဆက်မှုတွင်သင့်ရဲ့ဦးနှောက်, ဒါမှမဟုတ်ဖတ် ဆောင်းပါး "ဒီနေရာမှာစတင်" ။ ထို့နောက်သင်သည်အောက်ပါစာရင်းမှ“ ဆောင်းပါးများ” သို့မဟုတ်“ ဗီဒီယိုများ” ကိုဆက်လုပ်လိုပေမည်။
ပံ့ပိုးမှု: အခြားအထောကျအကူပွုက်ဘ်ဆိုက်များမှ links ။ YBOP မျှဖိုရမ်ရှိပါတယ်။
အခြေခံဆောင်းပါးပြန်ဖွင့်: သင်စတင်ရန်မတိုင်မီအခြေခံကိုဖတ်ပါ။ ထောင်ပေါင်းများစွာ၏ Browse အကောင့် (နာလန်ထူပုံပြင်များ) ကို restart ။ မှတ်ချက်- YBOP ၏ မူဝါဒသည် ပြန်လည်စတင်သည့် ဇာတ်လမ်းများ သို့မဟုတ် အခြားသော ကိုယ်တိုင်ရေးအစီရင်ခံမှုများ၏ အကြောင်းအရာများကို ဆင်ဆာဖြတ်ခြင်းမပြုရန်၊ ထို့ကြောင့် ဘာသာစကားအချို့သည် ကျွန်ုပ်တို့၏လာရောက်လည်ပတ်သူအချို့ကို ထိခိုက်စေနိုင်ပါသည်။
ပြောင်းလဲခြင်းဆောင်းပါးအဘို့အ Tools များ: Tools များသငျသညျကို restart နှင့်သင့်ဦးနှောက် rewiring နှင့်အတူစတင်, သင့်ပြန်လည်ထူထောင်ရေး၌သင်တို့ကိုကူညီကိုသုံးနိုင်သည်။ အများအပြားပုဂ္ဂိုလ်ရေးအကောင့်များနှင့်အကြံပြုချက်များကိုပါဝင်သည်။
Porn အသုံးပြုခြင်းနှင့် FAQ များပြန်လည်တင်ခြင်း: ဒီနေရာမှာကျွန်တော် (နှင့်ညစ်ညမ်းအသုံးပြုသူများသည်) ကိုအများဆုံးဟုမေးမေးခွန်းများကိုဖြေပါ။ အများအပြားပုဂ္ဂိုလ်ရေးအကောင့်ပါရှိသည်။
ဆောင်းပါးများ။ သင်နဲ့ပါတ်သက်တဲ့အမျိုးမျိုးသောအကြောင်းအရာများကိုဖုံးကွယ်ထားသည့်ဆက်စပ်ဆောင်းပါးများကိုခြောက်ပိုင်းခွဲခြားထားသည်။ သိပ္ပံနှင့်ညစ်ညမ်းသောသုံးစွဲသူများ၏ပုံပြင်များကိုနားလည်ရန်လွယ်ကူသောလူထုအတွက်ရေးသားခဲ့သည်။
သုတေသနစာမျက်နှာ: ဆောင်းပါးများ, porn စွဲနှင့်ပြန်လည်ထူထောင်ရေးဆက်စပ်ကြောင်းကောက်နှုတ်ချက်နှင့်သုတေသနအဖြစ်တစ်ဦးဟာသအပိုင်းပါဝင်သည်။ ဒါ့အပြင်အသံ-အမြင်အာရုံတင်ပြချက်များပေါ်လာကြည့်ပါ။
မြင် မေးခွန်းထုတ်စရာ & အထင်မြင်မှားစေသောလေ့လာရေး အလွန်အမင်းထုတ်ပြန်ထားတဲ့စာတမ်းများနှင့်သူတို့ဖြစ်ဖို့တောင်းဆိုဘယ်အရာကိုမစပ်ဆိုင်ကြောင်းကိုဆောင်းပါးများကိုအိပ်လေ၏။
ဤနေရာတွင် အချက်အလက်များ ပေါင်းစပ်ထားသောကြောင့် လာရောက်လည်ပတ်သူ အများအပြား ပြန်ပြန်တက်လာသည်ကို မြင်တွေ့ရခြင်းသည် ကောင်းပါတယ်။ သူတို့ရဲ့ ရွေးချယ်မှုတွေကို နားလည်ပြီးတာနဲ့ သူတို့လိုချင်တဲ့ ရလဒ်ကို ရအောင် ထိန်းကျောင်းပေးတယ်။ ကျွန်ုပ်တို့ပြောသည့်အတိုင်း "ဟန်ချက်၊ ပြီးပြည့်စုံခြင်းမဟုတ်၊ ပန်းတိုင်" ဟူ၍ဖြစ်သည်။
ဤနေရာတွင် သင့်လိင်အင်္ဂါနှင့် သင်ဘာလုပ်သည်ကို မည်သူမှ ဂရုမစိုက်ပါ။ မင်းရဲ့ဦးနှောက်အကြောင်း တိကျမှန်ကန်စွာ အသိပေးဖို့ ဂရုစိုက်ပါတယ်။ ကြိုဆိုပါတယ်။
အင်တာနက် ညစ်ညမ်း စွဲလမ်းမှု ရှိ၊ မရှိ ယေဘုယျအားဖြင့် “အတင်းအကြပ် လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ အပြုအမူ” သို့မဟုတ် “ပြဿနာရှိသော ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများ အသုံးပြုခြင်း” ဟု အများအားဖြင့် သိကြသော်လည်း၊
အားလုံးစှဲပစ္စည်းဥစ္စာများနှင့်ဓာတုစှဲနှစ်ဦးစလုံးအတွက်မှတ်တမ်းတင်ခဲ့ကြခြင်း, အရာဆိုင်းဘုတ်များ, ရောဂါလက္ခဏာနှင့်အပြုအမူတစ်ခုသတ်သတ်မှတ်မှတ်ထားတွင်ထင်ဟပ်နေသော shared အခြေခံဦးနှောက်အပြောင်းအလဲတစ်ခု constellation ပါဝငျ။
အင်တာနက်ကညစ်ညမ်းအချို့သောအသုံးပြုသူများသည်အတွက်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအရသာ morphing inducing ဖြစ်ပါတယ်။
အင်တာနက်ကညစ်ညမ်းအချို့သောအသုံးပြုသူများသည်အတွက်အမျိုးမျိုးသောသည်အခြားရောဂါလက္ခဏာများ (စသည်တို့ကိုအစစ်အမှန်မိတ်ဖက်, လူမှုရေးစိုးရိမ်ပူပန်မှု, စိတ်ကျရောဂါ, ဦးနှောက်မြူ, လှုံ့ဆျောမှုမရှိခြင်း, စိတ်ခံစားမှုထုံ, ဆုတ်ခွာလက္ခဏာတွေပိုပြီးအစွန်းရောက်ပစ္စည်းမှတင်းမာမှုလျှော့ချဖို့ဆွဲဆောင်မှု၏အရှုံး) ပိုမိုဆိုးဝါးသို့မဟုတ် inducing ဖြစ်ပါတယ်။
အင်တာနက်ကညစ်ညမ်းအရှုံးမပေးသူမြားစှာကိုမကြာခဏပစ္စည်းများ 3-5 အတွက်တဖြည်းဖြည်းတိုးတက်မှုသတိထားမိ။ သူတို့ဘုံထဲမှာရှိသည်ဖို့ပေါ်လာတစ်ခုတည်းသော variable ကိုသူတို့ရဲ့အတိတ်တွင်အင်တာနက်ညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုဖြစ်ပါတယ်။
ပြင်းထန်သော arousal မှ neuroscience တစ်ဦးကိစ္စအဖြစ်, လိင်အခြေအနေမှပါဝါအထူးသဖြင့်ဆယ်ကျော်သက်လိင်ရှိပါတယ်။
ဆီလျော်မှုရှိသောသုတေသန - ပထမ ဦး စွာ YBOP မှတောင်းဆိုမှုများကိုထောက်ခံသည့်လေ့လာမှုစာရင်းများရှိသည်။ (ကြည့်ပါ မေးခွန်းထုတ်စရာ & အထင်မြင်မှားစေသောလေ့လာရေး သူတို့ဖြစ်ဖို့တောင်းဆိုဘယ်အရာကိုမစပ်ဆိုင်ကြောင်းကိုမြင့်မားထုတ်ပြန်ထားတဲ့စာတမ်းများအတွက်) ။
porn / လိင်စွဲလမ်းပေါ်တွင်စစ်မှန်သောကျွမ်းကျင်သူများက '' ထင်မြင်ချက်များ? ဤစာရင်းတွင်ပါဝင်ပါသည် 31 မကြာသေးမီက neuroscience-based စာပေပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းနှင့်ဝေဖန်သုံးသပ်ချက် ကမ်ဘာပျေါတှငျထိပ်အာရုံကြောဆိုင်ရာသိပ္ပံပညာရှင်အချို့ဖြင့်ပြုလုပ်နိုင်ပါတယ်။ လူအားလုံးတို့သည်စွဲမော်ဒယ်ထောက်ခံပါတယ်။
ပိုပြီးအစွန်းရောက်ပစ္စည်းမှစွဲလမ်းနှင့်တင်းမာမှုလက္ခဏာတွေ? porn ကိုအသုံးပြုခြင်း (သည်းခံစိတ်) ၏တင်းမာမှုနှင့်ကိုက်ညီတွေ့ရှိချက်, porn ဖို့လေ့နှင့်ပင်ဆုတ်ခွာလက္ခဏာတွေသတင်းပို့ 60 လေ့လာမှုများကျော် (စွဲခြင်းနှင့်ဆက်နွယ်သောလက္ခဏာများနှင့်လက္ခဏာများ) ။ နောက်ထပ်စာမျက်နှာ porn အသုံးပြုသူများအတွက်ရုပ်သိမ်းရေးလက္ခဏာတွေအစီရင်ခံ 14 လေ့လာမှုများ.
porn နှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပြဿနာများ? ဤစာရင်းတွင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုံ့ဆော်မှုမှ porn အသုံးပြုမှု / ညစ်ညမ်းလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပြဿနာများစွဲခြင်းနှင့်နိမ့် arousal ချိတ်ဆက် 45 လေ့လာမှုများကျော်ပါဝင်သည်။ အဆိုပါ အဆိုပါစာရင်းထဲတွင်ပထမဦးဆုံး7လေ့လာမှုများကိုသရုပ်ပြ causation, သင်တန်းသားများအဖြစ် porn အသုံးပြုမှုကိုဖယ်ရှားပစ်ခြင်းနှင့်နာတာရှည်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလုပ်မဖြစ်အနာကိုငြိမ်းစေ။
အဘယ်အရာကိုညစ်ညမ်းအသုံးပြုခြင်းနှင့်မြီးကောင်ပေါက်ကောအသို့နည်း ၏ဤစာရင်းကိုထုတ်စစ်ဆေး အချို့သော 300+ ဆယ်ကျော်သက်လေ့လာမှုများဒါမှမဟုတ်စာပေဤပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း: ပြန်လည်သုံးသပ် # 1, review2, ပြန်လည်သုံးသပ် # 3, ပြန်လည်သုံးသပ် # 4, ပြန်လည်သုံးသပ် # 5, ပြန်လည်သုံးသပ် # 6, ပြန်လည်သုံးသပ် # 7, ပြန်လည်သုံးသပ် # 8, ပြန်လည်သုံးသပ် # 9, ပြန်လည်သုံးသပ် # 10, ပြန်လည်သုံးသပ် # 11, ပြန်လည်သုံးသပ် # 12, ပြန်လည်သုံးသပ် # 13, ပြန်လည်သုံးသပ် # 14, ပြန်လည်သုံးသပ် # 15, ပြန်လည်သုံးသပ်မှု # 16, ပြန်လည်သုံးသပ်မှု # 17။ သုတေသန၏ဤ 2012 ပြန်လည်သုံးသပ်၏နိဂုံးမှသည် - ပြုစုပျိုးထောင်ခြင်းအပေါ်အင်တာနက်ကိုညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံများ၏သက်ရောက်မှု: အသုတေသနတစ်ဦးကပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်း:
မြီးကောင်ပေါက်များကအင်တာနက်ကိုတိုးမြှင့်ရရှိမှုလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပညာရေး, သင်ကြားရေးနှင့်စီးပွားရေးတိုးတက်မှုတို့အတွက်မကြုံစဖူးအခွင့်အလမ်းများကိုဖန်တီးထားသည်။ ပြောင်းပြန်စာပေများတွင်ထင်ရှားကြောင်းအန္တရာယ်များ၏အန္တရာယ်သည်ဤဆက်ဆံရေး elucidate ဖို့အားထုတ်မှုရှိအွန်လိုင်းညစ်ညမ်းမှဆယ်ကျော်သက်ထိတွေ့မှုစုံစမ်းစစ်ဆေးရန်သုတေသီများဦးဆောင်လျက်ရှိသည်။ စုပေါင်းဤလေ့လာမှုများညစ်ညမ်းလောင်သူလူငယ်အကြံပြု လက်တွေ့မကျသည့်လိင်ဆိုင်ရာတန်ဖိုးများနှင့်ယုံကြည်မှုများကိုဖြစ်ပေါ်စေနိုင်သည်။ တွေ့ရှိချက်များအရခွင့်ပြုထားသောလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာသဘောထားများ၊ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကြိုတင်စိတ် ၀ င်စားမှုများနှင့်အစောပိုင်းလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစမ်းသပ်မှုများသည်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများကိုမကြာခဏစားသုံးခြင်းနှင့်ဆက်စပ်လျက်ရှိသည်။ မည်သို့ပင်ဆိုစေကာမူ၊ ဆယ်ကျော်သက်အရွယ်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကိုလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာရန်လိုသည့်အပြုအမူများနှင့်အကြမ်းဖက်မှုကိုဖော်ပြသည့်တသမတ်တည်းတွေ့ရှိချက်များပေါ်ထွက်လာခဲ့သည်။
အားလုံးလေ့လာမှုများဆက်စပ်မှုဖြစ်ကြသည်မဟုတ်လော Nope: အင်တာနက်အသုံးပြုခြင်းနှင့်ညစ်ညမ်းမှုကိုအသုံးပြုခြင်းကိုသရုပ်ပြသည့်လေ့လာမှု ၇၅ ခုကျော် ဖြစ်စေတဲ့ အနုတ်လက္ခဏာရလဒ်များနှင့်ရောဂါလက္ခဏာများနှင့် ဦး နှောက်အပြောင်းအလဲများကို. ဤအကြောင်းအရာနှင့် ပတ်သက်၍ ဒေါက်တာ Paul Wright ၏ ထုတ်ဝေသည့် အပိုင်းကိုလည်း ကြည့်ပါ။ Paul Wright, PhD သည် Porn Researchers' Questionable Tactics (2021) ကို ခေါ်သည်။
ပွိုင့်ခြင်းနှင့်ချယ်ရီ-ကောက်ယူလေ့လာမှုကဒီကျယ်ပြန့်ဝေဖန်မှုကိုတွေ့မြင်ပြောနေတာနီးပါးတိုင်း naysayer တစ် debunking များအတွက်: "Debunkingအဘယ်ကြောင့်ကျနော်တို့ဆဲ Porn အကဲခတ်အကြောင်းဒါကြောင့်စိုးရိမ်နေ Are? "မာတီ Klein, တေလာ Kohut နှင့်နီကိုးလ် Prause (2018) က။ ဘက်လိုက်ဆောင်းပါးတွေကိုအသိအမှတ်မပြုဖို့ကိုဘယ်လို: သူတို့ကကိုးကား Prause et al။၊ 2015 (၎င်းသည် ညစ်ညမ်းစွဲလမ်းမှုကို ဆန့်ကျင်ကြောင်း မှားယွင်းစွာ အခိုင်အမာဆိုသည်)၊ ဒါဇင်ပေါင်းများစွာသော အာရုံကြောဆိုင်ရာလေ့လာမှုများကို ချန်လှပ်ထားစဉ်၊.
လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပြfromနာများမှ porn နှင့်အနာရောဂါငြိမ်းစရာ ...
သို့ရာတွင် YBOP ကိုတီထွင်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီးခိုင်လုံသောအထောက်အထားနှင့်လက်တွေ့အထောက်အထားကဖြစ်ရပ်အသစ်တစ်ခုကိုညွှန်ပြသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ အောက်ပါစာမျက်နှာများတွင်ညစ်ညမ်းမှုနှင့်လိင်ဆိုင်ရာပြpornနာများကိုကုသပေးသောယောက်ျားနှင့်သက်ဆိုင်သောအကောင့် ၆၀၀၀ ခန့်ပါ ၀ င်သည် (ED, anorgasmia, libido အနိမ့်၊ morphing လိင်အရသာစသည်)
အောက်ပါရှစ်စာမျက်နှာများ porn-သွေးဆောင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလုပ်မဖြစ်ကနေပြန်လည်နာလန်ထူဖော်ပြတိုတောင်းပုံပြင်များဆံ့: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
ထို့အပြင်အထက်ပါလေ့လာမှုများရန်, ဒီစာမျက်နှာ 150 ကျွမ်းကျင်သူများကကျော်အားဖြင့်ဆောင်းပါးများနှင့်ဗီဒီယိုများကိုပါရှိသည် အသိအမှတျပွုနှင့်အောင်မြင်စွာ porn-သွေးဆောင် ED နှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလိုဆန္ဒ၏ညစ်ညမ်း-သွေးဆောင်အရှုံးကုသကြသူ (urology ပါမောက္ခ, ဆီးရောဂါပါရဂူ, စိတ်ရောဂါကုဆရာဝန်, စိတ်ပညာရှင်, sexologists, MDS) ။ တကယ်တော့, porn-သွေးဆောင် ED အမေရိကန်ဆီးလမ်းကြောင်းဆိုင်ရာအစည်းအရုံးညီလာခံ, မေလ 6-10, 2016 မှာတင်ဆက်ခဲ့သည်: အပိုင်း 1, အပိုင်း 2, အပိုင်း 3, အပိုင်း 4.
သို့သော် 'စွဲလမ်းမှု' သည် APA's တွင်မပါဝင်ပါ DSM-5ညာဘက်? အဆိုပါယားနောက်ဆုံး 2013 အတွက်လက်စွဲ updated လိုက်တဲ့အခါ (DSM-5)ဒါကြောင့်တရားဝင်ဆွေးနွေးရန်အတွက်အစားဝင်ရောက်ခြင်း "အင်တာနက်ညစ်ညမ်းစွဲ" ကိုစဉ်းစားကြဘူး "hypersexual ရောဂါ။ " ပြဿနာလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူများအတွက်အဆုံးစွန်သောထီးအသုံးအနှုန်းကပါဝင်ဘို့အကြံပြုခဲ့သည် DSM-5 ရဲ့ ပြန်လည်သုံးသပ်၏နှစ်ကြာလိင်လုပ်ငန်း Group မှပိုင်ဆိုင်တယ်။ သို့သော်တစ်ဦးဒသမနာရီ "ကြယ်ပွင့်အခန်းထဲက" session တစ်ခုအတွက် (လိင်လုပ်ငန်း Group မှအဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးအရ), အခြား DSM-5 အရာရှိများတဖက်သတ် hypersexuality ပယ်ချ, ယုတ္တိမတန်အဖြစ်ဖော်ပြခဲ့ကြကြောင်းအကြောင်းပြချက်ကိုးကား.
ဗိုလ်မှူးဆေးဘက်ဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းများလာမည့်ယား၏ရွေ့လျားနေကြသည်။ အဆိုပါ စွဲလမ်းဆေးပညာ American Society (ASAM) သည် ကျွန်ုပ်၏ TEDx ဟောပြောချက် “The Great Porn Experiment” ကို မပြင်ဆင်မီ လအနည်းငယ်အလို၊ သြဂုတ်လ၊ 2011 ခုနှစ် သြဂုတ်လ၊ ASAM မှ ထိပ်တန်းစွဲလမ်းမှု ကျွမ်းကျင်သူများက ၎င်းတို့ကို ထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။ စွဲလမ်း၏ဂရုတစိုက်ထွင်းထုနှင့်အဓိပ္ပါယ်။ အသစ်ချက်နှင့်အဓိပ္ပါယ် အဓိကအချက်များကိုအချို့စေသည် ငါသည်ငါ့ဟောပြောပွဲအတွက်ဖန်ဆင်းတော်မူ၏။ မူးယစ်ဆေးဝါးများလုပ်ပေးအဖြစ်ဗွေဆော်, အမူအကျင့်စွဲလမ်းမှုကိုတူညီသောအခြေခံနည်းလမ်းတွေထဲမှာဦးနှောက်ကိုထိခိုက်စေ။ တစ်နည်းပြောရရင်တော့, စွဲလမ်းများစွာကိုမရ, မရှိမဖြစ်လိုအပ်တဲ့တဦးတည်းရောဂါ (ခွအေနအေ) ဖြစ်ပါသည်။ ASAM အတိအလင်းဖော်ပြထား လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူစွဲတည်ရှိ နှင့်သေချာပေါက်ပစ္စည်းဥစ္စာစွဲလမ်းတှငျတှေ့တူညီတဲ့အခြေခံဦးနှောက်အပြောင်းအလဲများကြောင့်ဖြစ်ပွားရမည်ဖြစ်သည်။
ယခုအခါ ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့သည် APA ၏ အလွန်အကျွံသတိပေးချက်ကို မှန်ကန်စွာ သတ်မှတ်လိုက်ပြီဖြစ်သည်။ ၎င်း၏ရောဂါရှာဖွေရေးလက်စွဲ၏နောက်ဆုံးထုတ်ထုတ်ဝေမှု ICD, 2019 ခုနှစ် နွေဦးရာသီတွင် တရားဝင် မွေးစားခဲ့ပါသည်။ အသစ်က ICD-11 "compulsive လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူရောဂါ" အတွက်တစ်ဦးရောဂါလက္ခဏာတွေကိုပါဝင်သည် အဖြစ်ကောင်းစွာအဖြစ် "ဘို့တစွဲလမ်းစေအပြုအမူတွေကြောင့် disorders” အတင်းအဓမ္မလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူချို့ယွင်းမှု သို့မဟုတ် CSBD သည် "ညစ်ညမ်းစွဲလမ်းခြင်း" နှင့် "လိင်စွဲလမ်းခြင်း" အတွက် ထီးအသုံးအနှုန်းဖြစ်သည်။ WHO သည် လက်တွေ့နှင့် လက်တွေ့ကျသော အထောက်အထားများ တိုးလာနေသောကြောင့် ဤရောဂါရှာဖွေတွေ့ရှိမှုအသစ်ကို ဖန်တီးခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ CSBD အတွက် ကုသမှုကို ရှာဖွေနေသူ 80% ကျော်သည် ၎င်းတို့၏ ပြဿနာရှိသော ညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုတွင် အကူအညီ ရယူလိုကြောင်း သုတေသနပြုချက်များအရ သိရသည်။
ယခုရှိပါတယ် 33+ စာပေသုံးသပ်ချက်များနှင့် မှတ်ချက်များနှစ်ခုဆေးဘက်ဆိုင်ရာဆရာဝန်များအားဖြင့်ဒီ 2015 စက္ကူအပါအဝင်: တစ်ဦးရောဂါအဖြစ်လိင်စွဲ: အကဲဖြတ်ဘို့အထောက်အထား, Diagnosis နှင့်ဝေဖန်သူများမှတုံ့ပြန်မှု (2015)တစ်ဦးကိုထောက်ပံ့ပေးရာ ကနေဇယား တိကျတဲ့ဝေဖန်မှုများကိုခံယူပြီး၎င်းတို့ကိုတန်ပြန်သောအညွှန်းများကိုပေးသည်။ အင်တာနက်စွဲလမ်းမှုအမျိုးအစားများနှင့်သက်ဆိုင်သည့်အာရုံကြောသိပ္ပံစာပေကိုစေ့စေ့စပ်စပ်ပြန်လည်သုံးသပ်ရန်အင်တာနက်ညစ်ညမ်းမှုကိုအထူးအာရုံစိုက်သည့်အနေဖြင့် - အင်တာနက်ကိုညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံစွဲ၏ neuroscience: တစ်ဦးကိုပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် Update ကို (2015) ။ ပြန်လည်သုံးသပ်ချက်တွင် “ညစ်ညမ်းစွဲလမ်းမှုကို ဖယ်ရှားပစ်ရန် ရည်မှန်းထားသည့် EEG လေ့လာမှုနှစ်ခုကို ဝေဖန်သုံးသပ်သည် (ကြည့်ပါ)။ ဒီစာမျက်နှာ ဝေဖန်မှုများနှင့်မြင့်မားမေးခွန်းထုတ်စရာများနှင့်အထင်မြင်မှားစေသောလေ့လာမှုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာများအတွက်) ။ ဤသည်တိုတောင်းသောပြန်လည်သုံးသပ်, compulsive လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ၏ Neurobiology: လွန်မြောက်သိပ္ပံ (2016), ဖော်ပြထား:
CSB နှင့်မူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲမှုအကြားတူညီမှုတစ်ခုအနေဖြင့်စွဲလမ်းမှုအတွက်ထိရောက်သောကြား ၀ င်ဆောင်ရွက်မှုများသည် CSB အတွက်အလားအလာကောင်းများရှိစေကာအနာဂတ်အလားအလာကိုတိုက်ရိုက်စုံစမ်းစစ်ဆေးရန်အတွက်အနာဂတ်သုတေသနလမ်းညွှန်များကိုထိုးထွင်းသိမြင်စေသည်။
ယေးလ်နှင့်ကင်းဘရစ်တက္ကသိုလ်များရှိအာရုံကြောဆိုင်ရာသိပ္ပံပညာရှင်များက ၂၀၁၆ ခုနှစ်တွင်လိင်ဆိုင်ရာအပြုအမူများ (CSB) ကိုပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း - တစ်ခုစွဲထည့်သွင်းစဉ်းစားရမည်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ compulsive သငျ့သလော - နိဂုံးချုပ်သည် -
CSB နှင့်ပစ္စည်းသုံးစွဲမှုမမှန်မှုများအကြားထပ်တူလက္ခဏာများရှိသည်။ သာမန် neurotransmitter စနစ်များသည် CSB နှင့်ပစ္စည်းအသုံးပြုမှုဆိုင်ရာရောဂါများကိုအထောက်အကူပြုနိုင်သည်။ မကြာသေးမီက neuroimaging လေ့လာမှုများသည်တဏှာနှင့်အာရုံစူးစိုက်မှုနှင့်ဆက်စပ်သောတူညီမှုများကိုမီးမောင်းထိုးပြသည်။ ဘက်လိုက်မှု။"
နှင့် ၂၀၁၆ မက်စ်ပန့်ခ်တက္ကသိုလ်မှအာရုံကြောသိပ္ပံပညာရှင်များသုံးသပ်ချက် - Hypersexuality ၏ Neurobiological အခြေခံ - နိဂုံးချုပ်;
"အတူတကွအတူတကွ, သက်သေအထောက်အထား hypersexuality ၏ပေါ်ပေါက်ရေးအတွက်တိုကျရိုကျပေါ်၌ရှိသောအမြှေး, amygdala, hippocampus, hypothalamus, septum နှင့် ဦး နှောက်ဒေသများအတွက်အပြောင်းအလဲများကိုအဓိကအခန်းကဏ္ play ကြောင်းဆိုလိုသည်ပုံရသည်။ မျိုးရိုးဗီဇလေ့လာမှုများနှင့် neuropharmacological ကုသမှုချဉ်းကပ် dopaminergic စနစ်၏ပါဝင်ပတ်သက်မှုမှာညွှန်ပြ။ "
အမေရိကန်ရေတပ်မှ ဆရာဝန်များ ပူးပေါင်းရေးသား၊ အင်တာနက်ကိုညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလုပ်မဖြစ်စေသလဲ? လက်တွေ့အစီရင်ခံစာများ (2016) နဲ့တစ်ဦးကိုပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်း ညစ်ညမ်းဖြစ်စေသော လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပြဿနာများအကြောင်း စာပေ၏ ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် သုံးသပ်ချက်တစ်ခုဖြစ်သည်။ ဆန်းစစ်ချက်သည် အင်တာနက် ညစ်ညမ်းမှု ထွန်းကားလာချိန်မှစ၍ လူငယ်များ၏ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ ပြဿနာများ သိသိသာသာ မြင့်တက်လာကြောင်း ဖော်ပြသည့် အချက်အလက်ကို ပေးဆောင်သည်။ စာတမ်းတွင် ညစ်ညမ်းစွဲလမ်းမှုနှင့် လိင်စိတ်အေးစေမှုတို့နှင့် ပတ်သက်သော အာရုံကြောဆိုင်ရာ လေ့လာမှုများကိုလည်း ဆန်းစစ်သည်။ ညစ်ညမ်းမှုဖြစ်စေသော လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ ကမောက်ကမဖြစ်မှုများ ဖြစ်ပေါ်လာသော အမျိုးသားများ၏ ဆေးခန်း ၃ ခုကို ဆရာဝန်များက ပေးသည်။
နှစ်ခုထိပ်တန်းအာရုံကြောဆိုင်ရာသိပ္ပံပညာရှင်များကတစ်ဦးကမျြးအခနျးကွီး: အွန်လိုင်းညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံစွဲဖို့ Neuroscientific သို့ချဉ်း ကပ်. (2017) - ကောက်နုတ်ထားပါတယ်:
လွန်ခဲ့သောဆယ်စုနှစ် ၂ ခုအတွင်းလေ့လာမှုဆိုင်ရာအာရုံကြောဆိုင်ရာသိပ္ပံနည်းကျချဉ်းကပ်မှု၊ အထူးသဖြင့်အလုပ်လုပ်သောသံလိုက်ပဲ့တင်ရိုက်ခတ်မှုဆိုင်ရာပုံရိပ်များ (fMRI) နှင့်စမ်းသပ်မှုအခြေအနေများအောက်တွင်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာကြည့်ခြင်းကိုကြည့်ရှုခြင်း၏အာရုံကြောဆက်စပ်မှုနှင့်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများအသုံးပြုမှု၏အာရုံကြောဆက်စပ်မှုများကိုလေ့လာခဲ့သည်။ ယခင်ရလဒ်များအရညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများသုံးစွဲခြင်းကိုအလွန်အကျွံသုံးစွဲမှုနှင့်ဆက်စပ်သောစွဲလမ်းမှု၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက်အခြေခံသိထားသည့် neurobiological ယန္တရားများနှင့်ချိတ်ဆက်နိုင်သည်။ ”
ယေးလ်နှင့်ကိန်းဘရစ်မှာအာရုံကြောဆိုင်ရာသိပ္ပံပညာရှင်များကတစ်ဦးကမှတ်ချက်ပြု: အလွန်အကျွံလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူတစ်ခုစွဲလမ်းဖရိုဖရဲဖြစ်သနည်း (2017) - ကောက်နှုတ်ချက်:
လိင်မှုဆိုင်ရာအပြုအမူဆိုင်ရာရောဂါဆိုင်ရာနဗ်ကြောပညာရပ်ဆိုင်ရာသုတေသနသည်အာရုံစူးစိုက်မှုဘက်လိုက်မှု၊ မက်လုံးပေးစွဲမှတ်စေမှုနှင့် ဦး နှောက်ကိုအခြေခံသည့် cue ဓာတ်ပြုခြင်းတို့နှင့်ဆက်စပ်သောတွေ့ရှိချက်များကိုစွဲလမ်းစေခဲ့သည်။ လိင်မှုဆိုင်ရာအပြုအမူဆိုင်ရာမသန်စွမ်းမှုအားစွဲလမ်းစေသောရောဂါအဖြစ်သတ်မှတ်ခြင်းသည်မကြာသေးမီကအချက်အလက်များနှင့်ကိုက်ညီပြီး၎င်းရောဂါခံစားနေရသူနှင့်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအရသက်ရောက်မှုခံရသည့်ဆေးပညာရှင်များ၊ သုတေသီများနှင့်ပုဂ္ဂိုလ်များကိုအကျိုးပြုနိုင်လိမ့်မည်ဟုယုံကြည်ပါသည်။
ယင်းအပြင် သုံးသပ်ချက် 33+ နှင့် မှတ်ချက်များ, အားလုံးထုတ်ဝေခဲ့သည် အာရုံကြောဆိုင်ရာလေ့လာမှုတစ်ခုမှလွဲ၍ YBOP မှ တင်သွင်းသော အရေးဆိုမှုများကို ထောက်ခံပါ။ ဤသည်မှာ တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းစာရင်းဖြစ်သည်-
အတင်းအကျပ်ပြုတတ်သောလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ (2009) ၏ထကြွလွယ်သောနှင့် neuroanatomical ဝိသေသလက္ခဏာများ၏ပဏာမစုံစမ်းစစ်ဆေးမှု အဓိကအားဖြင့်လိင်စွဲ။ လေ့လာမှုအရလိင်အကျင့်စွဲသူများ (hypersexuals) တွင် Go-NoGo အလုပ်တွင်ပိုမိုစိတ်ဓာတ်ကျစေသည့်အပြုအမူကိုထိန်းချုပ်သူများနှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါကဖော်ပြသည်။ ဦး နှောက်ကိုစကင်ဖတ်စစ်ဆေးမှုအရလိင်စွဲသူများသည်ပိုမိုများပြားသောစနစ်မကျသည့် prefrontal cortex အဖြူရောင်ကိစ္စဖြစ်သည်။ ဤသည်တွေ့ရှိချက် hypofrontality, စွဲ၏အထိမ်းအမှတ်တံဆိပ်နှင့်ကိုက်ညီသည်။
လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ Desire မဟုတ်ဘဲ Hypersexuality, လိင်ပုံများ (2013) ကရူးနှမ်း Neurophysiological တုံ့ပြန်ချက်မှ Related ဖြစ်ပါတယ် [ပိုမိုသိသာထင်ရှားခြင်းနှင့်လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ခြင်းသည်လိင်ဆိုင်ရာအလိုဆန္ဒလျော့နည်းမှုနှင့်ဆက်နွယ်သည်] - ဤ EEG လေ့လာမှုကိုကြေငြာခဲ့သည် မီဒီယာ porn / လိင်စွဲလမ်း၏တည်ရှိမှုဆန့်ကျင်သက်သေအထောက်အထားအဖြစ်။ မရဒါ. သံမဏိ et al။ 2013 အမှန်တကယ်ဆင်း-ထိန်းညှိလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလိုဆန္ဒ porn စွဲများနှင့်ညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုကိုနှစ်ဦးစလုံး၏တည်ရှိမှုဖို့ထောက်ခံမှုချေးငှားသည်။ ရှစ်လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်အချင်းချင်းပြန်လည်သုံးသပ်စာတမ်းများအမှန်တရားရှင်းပြ: ၏ peer-ပြန်လည်သုံးသပ်ဝေဖန်မှု သံမဏိ et al ။, 2013.
ဦးနှောက်ဖွဲ့စည်းပုံနှင့်ညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံစားသုံးမှုနှင့်အတူ Functional ဆက်သွယ်မှု Associated: Porn အပေါ်ဦးနှောက် (2014) ညစ်ညမ်းသောညစ်ညမ်းမှုနှင့်ဆက်စပ်သော ဦး နှောက်ပြောင်းလဲမှုသုံးခုကိုတွေ့ရှိခဲ့သောဂျာမန်လေ့လာမှုတစ်ခုသည်ညစ်ညမ်းသောပမာဏနှင့်ဆက်စပ်မှုရှိသည်။ ညစ်ညမ်းမှုပိုများသောကြောင့်ဆုချင့်ချိန်သောနေရာတွင်လှုပ်ရှားမှုနည်းလေလေစိတ်ဓာတ်မကျဆင်းမှုကိုပြသသည်။
နှင့် compulsive လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ (2014) မပါဘဲပုဂ္ဂိုလ်များအတွက်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ Cue reactivity ၏အာရုံကြောဆက်စပ် လေ့လာမှုတစ်ခုစီးရီးအတွက်ပထမ ဦး ဆုံး။ မူးယစ်ဆေးစွဲသူများနှင့်အရက်သမားများတွင်တွေ့ရသည့်အတိုင်းပင် ဦး နှောက်လှုပ်ရှားမှုသည်အလားတူဖြစ်သည်။ ညစ်ညမ်းသောစွဲသူများသည်လက်ခံထားသောစွဲလမ်းမှုပုံစံနှင့်ပိုမိုကိုက်ညီကြောင်းကိုလည်းတွေ့ရှိရသည် မဟုတ် ပိုပြီး "က" ကြိုက်တယ်။ အခြားအဓိကတွေ့ရှိချက်တစ်ခုမှာ (မီဒီယာတွင်ဖော်ပြထားခြင်းမရှိပါ) ဘာသာရပ်များ၏ ၅၀% ကျော် (ပျမ်းမျှအသက် ၂၅ နှစ်) သည်စစ်မှန်သောမိတ်ဖက်များနှင့်စိုက်ထူခြင်း / နှိုးဆွမှုရရှိရန်အခက်အခဲရှိခဲ့သော်လည်းညစ်ညမ်းမှုနှင့်အတူစိုက်ထူခြင်းကိုရရှိနိုင်သည်။
နှင့် compulsive လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ (2014) မပါဘဲပုဂ္ဂိုလ်များအတွက်လိင်အကဲဆတ်တွေကိုဦးတည် Enhanced အာရုံကိုဘက်လိုက်မှု တွေ့ရှိချက်များသည်မူးယစ်ဆေးစွဲခြင်းတွင်တွေ့ရသောနှင့်ကိုက်ညီသည်။
အသစ်အဆန်း, အခြေအနေများနှင့်အာရုံကိုဘက်လိုက်မှုလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဆုလာဘ်များ (2015) မှ ထိန်းချုပ်မှုနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်ညစ်ညမ်းစွဲစွဲသူများသည်လိင်မှုဆိုင်ရာအသစ်အဆန်းနှင့်ညစ်ညမ်းမှုနှင့်ဆက်စပ်သောအခြေအနေများကိုဖော်ပြသည်။ သို့သော်ညစ်ညမ်းစွဲစွဲသူများ၏ ဦး နှောက်သည်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာရုပ်ပုံများကိုပိုမိုမြန်ဆန်စွာလေ့ကျင့်သည်။ အသစ်အဆန်းကို ဦး စားပေးကြိုတင်မတည်ရှိသေးသောကြောင့်ညစ်ညမ်းသောစွဲလမ်းမှုသည်အလေ့အကျင့်နှင့် desensitization ကိုကျော်လွှားရန်အသစ်စက်စက်ရှာဖွေခြင်းကိုမောင်းနှင်သည်။
ပြဿနာ Hypersexual အပြုအမူနှင့်အတူပုဂ္ဂိုလ်များအတွက်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ Desire ၏အာရုံကြောအလွှာ (2015) ဤကိုရီးယား fMRI လေ့လာမှုသည် porn အသုံးပြုသူများနှင့် ပတ်သက်၍ အခြား ဦး နှောက်လေ့လာမှုများကိုပုံတူပွားသည်။ ကင်းဘရစ်တက္ကသိုလ်လေ့လာမှုများအရမူးယစ်ဆေးစွဲသူများ၏ပုံစံများကိုထင်ဟပ်စေသောလိင်စွဲသူများအား cue-induced ဦး နှောက်လှုပ်ရှားမှုပုံစံများကိုတွေ့ရှိခဲ့သည်။ ဂျာမန်လေ့လာမှုအတော်များများနှင့်အညီမူးယစ်ဆေးစွဲသူများ၏လေ့လာချက်များအရ prefrontal cortex တွင်အပြောင်းအလဲများတွေ့ရှိရသည်။
ပြImagesနာရှိသောသုံးစွဲသူများနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပုံရိပ်များအားဖြင့်အပြုသဘောဆောင်သည့်အလားအလာများ“ Porn စွဲ” နှင့်ကိုက်ညီမှုမရှိသောထိန်းချုပ်မှုများ (၂၀၁၅) ၂၀၁၃ ဘာသာရပ်များမှနှိုင်းယှဉ်သော SPAN Lab EEG လေ့လာမှု သံမဏိ et al ။ , 2013 တစ်ကယ့်ကိုထိန်းချုပ်အုပ်စု။ ရလဒ်: ထိန်းချုပ်မှု porn စွဲနှိုင်းယှဉ် vanilla ညစ်ညမ်းဓါတ်ပုံများကိုလျော့နည်းတုံ့ပြန်မှုရှိခဲ့ပါတယ်။ ဦးဆောင်ရေးသားသူ, နီကိုးလ် Prause ဤရလဒ်များကို porn စွဲ debunk မလုပ်ပဲ, သေးသည်ဤတွေ့ရှိချက်များနှင့်အတူဿုံ align Kühn & Gallinat (၂၀၁၄), vanilla porn ၏ရုပ်ပုံများကိုတုန့်ပြန်သောအားဖြင့် porn အသုံးပြုမှုသည် ဦး နှောက်ကိုလျော့နည်းစေခြင်းနှင့်ဆက်စပ်မှုရှိသည်ဟုတွေ့ရှိရသည်။ သက်တူရွယ်တူပြန်လည်သုံးသပ်သည့်စာတမ်းများကဤလေ့လာမှုသည်မကြာခဏညစ်ညမ်းသောသုံးစွဲသူများ (စွဲလမ်းမှုနှင့်ကိုက်ညီမှု) တွင် desensitization / လေ့ကျင့်မှုကိုတွေ့ရှိသည်ဟုသဘောတူသည် ၏ peer-ပြန်လည်သုံးသပ်ဝေဖန်မှု Prause et al။ , 2015
hypersexual ရောဂါ (2015) နဲ့အမျိုးသားများတွင် HPA ဝင်ရိုး dysregulation အထီးလိင်စွဲလမ်းသူ (၆၇) ဦး နှင့်အသက်အရွယ်အလိုက်ထိန်းချုပ်မှု (၃၉) ခုဖြင့်လေ့လာမှုတစ်ခုပြုလုပ်ခဲ့သည်။ Hypothalamus-Pituitary-Adrenal (HPA) ဝင်ရိုးသည်ကျွန်ုပ်တို့၏စိတ်ဖိစီးမှုတုံ့ပြန်မှုတွင်အဓိကကစားသမားဖြစ်သည်။ စွဲ ဦးနှောက်ရဲ့စိတ်ဖိစီးမှုဆားကစ်ပြောင်းလဲ အလုပ်မဖြစ်တဲ့ HPA ဝင်ရိုးမှဦးဆောင်။ လိင်စွဲ (hypersexuals) ပေါ်မှာဤလေ့လာမှု (ပစ္စည်းဥစ္စာစွဲလမ်းနှင့်အတူတွေ့ရှိချက် mirror ကြောင်းပြောင်းလဲစိတ်ဖိစီးမှုတုံ့ပြန်မှုကိုတွေ့အဆိုပါသတင်းထုတ်ပြန်ချက်).
Hypersexual Disorder ၏ Pathophysiology အတွက် Neuroinflammation ၏အခန်းက္ပ (2016) ဒီလေ့လာမှုကကျန်းမာသန်စွမ်းသောထိန်းချုပ်မှုများနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်လိင်စွဲသူများတွင် Tumor Necrosis Factor (TNF) များပိုမိုပျံ့နှံ့နေကြောင်းဖော်ပြခဲ့သည်။ မူးယစ်ဆေးစွဲသူများနှင့်မူးယစ်ဆေးစွဲသည့်တိရိစ္ဆာန်များ (အရက်၊ ဘိန်းဖြူ၊ မက်) တွင် TNF (ရောင်ရမ်းခြင်းအမှတ်အသား) မြင့်မားသောအဆင့်များကိုတွေ့ရှိရသည်။
compulsive လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ: Prefrontal နှင့် limbic အသံအတိုးအကျယ်နှင့် interaction က (2016) ကျန်းမာသောထိန်းချုပ်မှုများနှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါက CSB ဘာသာရပ်များ (ညစ်ညမ်းသောစွဲသူများ) သည်ဘယ်ဘက် amygdala ပမာဏကိုတိုးမြှင့်ခြင်းနှင့် amygdala နှင့် dorsolateral prefrontal cortex DLPFC အကြားအလုပ်လုပ်ဆက်သွယ်မှုကိုလျှော့ချခဲ့သည်။
ပိုမိုနှစ်သက်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကိုကြည့်သည်အင်တာနက်ညစ်ညမ်းစွဲ (2016) ၏ရောဂါလက္ခဏာများဆက်နွယ်နေကြောင်းသောအခါ Ventral striatum လှုပ်ရှားမှု ရှာဖွေခြင်းနံပါတ် (၁) ။ ။ နှစ်သက်ဖွယ်ကောင်းသောညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများအတွက်ဆုဗဟိုဌာနလှုပ်ရှားမှု (ventral striatum) သည်ပိုမိုမြင့်မားသည်။ ရှာဖွေတွေ့ရှိချက် # ၂။ Ventral striatum ဓာတ်ပြုမှုသည်အင်တာနက်စွဲလမ်းမှုနှင့်ဆက်စပ်နေသည်။ တွေ့ရှိချက်နှစ်ခုလုံးက sensitization ကိုပြသပြီး the နဲ့ align လုပ်ပါ စွဲမော်ဒယ်။ စာရေးသူဖော်ပြသည်မှာ -အင်တာနက်ကညစ်ညမ်းစွဲ၏အာရုံကြောအခြေခံသည်အခြားစှဲဖို့နှိုင်းယှဉ်ဖြစ်ပါတယ်။"
ပြောင်းလဲအစာစားချင်စိတ်အခြေအနေများနှင့် compulsive လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူနှင့်အတူဘာသာရပ်များအတွက်ဦးနှောက်ကဲ့သို့ရှုပ်ထွေးသောဆက်သွယ်မှု (2016) ထံမှအဓိကတွေ့ရှိချက်နှစ်ခုကိုပုံတူပြုလုပ်သည့်ဂျာမန် fMRI လေ့လာမှု Voon et al ။ , 2014 နှင့် Kuhn & Gallinat 2014။ အဓိကတွေ့ရှိချက်များ - CSB အုပ်စုတွင်အစာစားချင်စိတ်အခြေအနေနှင့်အာရုံကြောဆက်သွယ်မှု၏အာရုံကြောဆက်စပ်မှုများကိုပြောင်းလဲခဲ့သည်။ သုတေသီများအဆိုအရပထမပြောင်းလဲမှု - ပိုမိုမြင့်မားသောအမဂဒလာကိုသက်ဝင်လှုပ်ရှားမှုသည် - အေးဆေးတည်ငြိမ်သောအေးစက်မှုကိုရောင်ပြန်ဟပ်နိုင်သည်။ ဒုတိယအပြောင်းအလဲ - ventral striatum နှင့် prefrontal cortex အကြားဆက်သွယ်မှုလျော့နည်းသွားခြင်း - Impulses သတင်းကိုထိန်းချုပ်ရန်စွမ်းရည်ချို့တဲ့ခြင်းအတွက်အမှတ်အသားတစ်ခုဖြစ်နိုင်သည်။ သုတေသီများက“ဤရွေ့ကား [ပွောငျးလဲ] စွဲရောဂါနှင့်ချင်တဲ့ဒေါသစိတ်နဲ့ထိန်းချုပ်လိုငွေပြမှု၏အာရုံကြောဆက်စပ်စုံစမ်းစစ်ဆေးသည်အခြားလေ့လာမှုများနှင့်အတူလိုင်း၌ရှိကြ၏။ " တွေကိုပိုမို amygdalar activation ၏တွေ့ရှိချက်များ (ာင်း) နှင့်အကျိုးကိုစင်တာနှင့် prefrontal cortex (အကြားဆက်သွယ်မှုလျော့နည်းသွားhypofrontality) ပစ္စည်းဥစ္စာစွဲတွင်တွေ့မြင်အဓိက ဦး နှောက်ပြောင်းလဲမှုနှစ်ခုရှိပါတယ်။ ထို့အပြင် compulsive porn သုံးစွဲသူ ၂၀ အနက် ၃ ခုသည်“ အော်ဂဇင် - စိုက်ထူသောရောဂါ” ခံစားခဲ့ရသည်။
အဆိုပါရောဂါဗေဒမူးယစ်ဆေးဝါးများ၏အလွဲသုံးစားမှုနှင့် Non-မူးယစ်ဆေးဆုလာဘ် (2016) ကိုဖြတ်ပြီး compulsive ကင်းဘရစ်တက္ကသိုလ်မှအရက်၊ မူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲသူများ၊ ဗီဒီယိုဂိမ်းစွဲသူများနှင့်ညစ်ညမ်းသောစွဲသူများ (compustivity) တွင်မဖြစ်မနေလုပ်ဆောင်ရမည့်အရာများကိုနှိုင်းယှဉ်လေ့လာသည်။ ကောက်နုတ်ချက်များ CSB ဘာသာရပ်များဝယ်ယူအဆင့်ကျန်းမာစေတနာ့ဝန်ထမ်းနှိုင်းယှဉ်ခြင်းနှင့် perseverate ဒါမှမဟုတ်ဆုကြေးအခြေအနေဆုံးရှုံးမှုတစ်ခုသို့မဟုတ်အနိုင်ရရှိဖြစ်စေပြီးနောက်နေဖို့ကပိုဖွယ်ရှိခဲ့ကြသည်အတွက်ဆုလာဘ်ထံမှသင်ယူရန်ပိုမိုမြန်ဆန်ခဲ့ကြသည်။ ဤရွေ့ကားတွေ့ရှိချက်ခြုံငုံဆုလာဘ်မှတိုးမြှင့် sensitivity ကိုအကြံပြုလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာသို့မဟုတ်ငွေကြေးဆိုင်ရာဖြစ်စေရလဒ်များမှအေးစက်လှုံ့ဆော်မှုများအတွက်မြှင့်တင်ရန် preference ကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ယခင်တွေ့ရှိချက်များနှင့်အတူဆုံ (BANCA et al ။ , 2016) ။
Hypersexual Disorder (2017) နှင့်အတူအမျိုးသားများအတွက် HPA ဝင်ရိုးတန်း Related Gene ၏ methylation ဤသည်ကလိင်စွဲသူများသည်အလုပ်မဖြစ်သောစိတ်ဖိစီးမှုစနစ်များရှိကြောင်းတွေ့ရှိရသည်။ ၎င်းမှာစွဲလမ်းမှုကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာသောအဓိကအာရုံကြော - endocrine ပြောင်းလဲမှုဖြစ်သည်။ လက်ရှိလေ့လာမှုကဗီဇပြောင်းလဲခြင်းသည်လူ့စိတ်ဖိစီးမှုတုန့်ပြန်မှု၏အဓိကကျသည့်ဗီဇပြောင်းလဲခြင်းနှင့်စွဲလမ်းမှုနှင့်နီးကပ်စွာဆက်စပ်မှုရှိကြောင်းတွေ့ရှိခဲ့သည်
ညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံကိုစှဲဖြစ်နိုင်သလား? ပြဿနာညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံအသုံးပြုမှုများအတွက်ကုသမှုရှာအမျိုးသားများအတွက်တစ်ခု fMRI လေ့လာမှု (2017) ကောက်နှုတ်ချက်: ပြဿနာညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှု (PPU) ဘာသာရပ်များဘာသာရပ်များကိုထိန်းချုပ်ရန်နှင့်နှိုင်းယှဉ်တဲ့အခါမှာအထူးသတွေကိုငွေကြေးအကျိုးအမြတ်ခန့်မှန်းတွေကိုအဘို့အခေါ်ဆောင်သွားဓါတ်ပုံတွေကိုခန့်မှန်းပေမယ့်မ ventral striatum ၏တိုးမြှင့် activation ပြသခဲ့သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏တွေ့ရှိချက်ပစ္စည်းဥစ္စာများနှင့်လောင်းကစားစွဲလမ်းမှုကိုလေ့လာဘာနဲ့ဆင်တူ, တွေကိုများ၏ anticipatory အပြောင်းအလဲနဲ့အထူးသခေါ်ဆောင်သွားဆုလာဘ်ခန့်မှန်းတွေနဲ့ဆက်စပ်အာရုံကြောများနှင့်အမူအကျင့်ယန္တရားများ PPU ၏ဆေးခန်းသက်ဆိုင်ရာ features တွေလုပ်ဖို့အရေးကြီးဆက်စပ်ကြောင်းအကြံပြုအပ်ပါသည်။
Emotion မသိနှင့် Non-သတိဆောင်ရွက်ချက်များ: သူတို့ဟာညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံသုံးစွဲမှုကြိမ်နှုန်းနှင့်အတူပြောင်းသလား? (2017) erotica အပါအ ၀ င်အမျိုးမျိုးသောစိတ်ခံစားမှုကိုဖြစ်ပေါ်စေသောပုံများအပေါ်ညစ်ညမ်းသုံးစွဲသူ၏တုန့်ပြန်မှု (EEG ဖတ်ခြင်းနှင့် Startle တုံ့ပြန်မှု) သည်လေ့လာမှုမှအကဲဖြတ်သည်။ လေ့လာမှုအနိမ့်အနိမ့်အပြာ porn အသုံးပြုသူများနှင့်ကြိမ်နှုန်းမြင့် porn အသုံးပြုသူများအကြားအများအပြားအာရုံကြောကွဲပြားမှုတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ ကောက်နှုတ်ချက် - တွေ့ရှိချက်များကိုတိုးမြှင့်ညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုကိုရှင်းလင်းပြတ်သားစွာ Self-အစီရင်ခံစာအားဖြင့်မပြသခဲ့သည့်စိတ်လှုပ်ရှားမှု-inducing လှုံ့ဆော်မှုဖို့ဦးနှောက်ရဲ့ Non-သတိတုံ့ပြန်မှုတခုတခုအပေါ်မှာသြဇာလွှမ်းမိုးမှုရှိသည်ဖို့ပေါ်လာအကြံပြုအပ်ပါသည်။
Neurophysiological တွက်ချက်ချဉ်းကပ် (2018) အပေါ်အခြေခံပြီးညစ်ညမ်းစွဲထောက်လှမ်းခြင်း ကောက်နုတ်ချက်: စမ်းသပ်မှုရလဒ်များအရစွဲပါဝင်သူများသည်စွဲလမ်းမှုမရှိသူသင်တန်းသားများနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင် frontal ဦး နှောက်ဒေသတွင် alpha wave လှုပ်ရှားမှုနည်းသည်။ Theta တီးဝိုင်းတွင်စွဲခြင်းနှင့်စွဲလမ်းမှုမရှိသောသူများအကြားမညီမျှမှုရှိကြောင်းကိုလည်းပြသခဲ့သည်။ သို့သော်ခွဲခြား alpha band ကဲ့သို့သိသာမဟုတ်ပါဘူး။
မီးခိုးရောင်ကိစ္စလိုငွေပြမှုနှင့်ပြဿနာ hypersexual အပြုအမူ (2018) နဲ့တဦးချင်းစီတို့တွင်သာလွန်ယာယီ gyrus အတွက်ပြောင်းလဲငြိမ်ဝပ်ရာပြည်နယ်ဆက်သွယ်မှု fMRI လေ့လာမှု။ အကျဉ်းချုပ် -လေ့လာမှုမီးခိုးရောင်ကိစ္စလိုငွေပြမှုနှင့် PHB နှင့်အတူတစ်ဦးချင်းစီ (လိင်စွဲ) တို့တွင်ယာယီ gyrus အတွက်ပြောင်းလဲ functional ဖြစ်စေဆက်သွယ်မှုပြသခဲ့သည်။ ပို. အရေးကြီးသည်, အမှိန်ဖျော့ဖွဲ့စည်းပုံနှင့် functional ဖြစ်စေဆက်သွယ်မှုအဆိုး PHB ၏ပြင်းထန်မှုနှင့်အတူဆက်နွယ်နေကြောင်းခဲ့ကြသည်။ ဤရွေ့ကားတွေ့ရှိချက် PHB ၏နောက်ခံအာရုံကြောယန္တရားများသို့သစ်ကိုထိုးထွင်းသိမြင်မှုကိုပေးသညျ။
ပြဿနာ Hypersexual အပြုအမူနှင့်အတူပုဂ္ဂိုလ်များအတွက် Stroop Task ကို (2018) စဉ်အတွင်းပြောင်းလဲ Prefrontal နှင့်ယုတ်ညံ့ Parietal လှုပ်ရှားမှု fMRI နှင့် neuropsychological လေ့လာမှုကိုထိန်းချုပ်မှုကို porn / sex စွဲသူများနှင့်နှိုင်းယှဉ်သည်။ တွေ့ရှိချက်များသည်မူးယစ်ဆေးစွဲသူများ၏လေ့လာမှုကိုထင်ဟပ်စေသည်။ လိင် / ညစ်ညမ်းစွဲသူများသည်အလုပ်အမှုဆောင်အားနည်းသောပြသနာများဖြစ်ပြီးဆေးစွဲသူများ၏ပြင်းထန်မှုနှင့်ဆက်နွှယ်နေသည့်စမ်းသပ်မှုအတွင်း PFC ၏လုပ်ဆောင်မှုကိုလျော့နည်းစေသည်။ ဤအရာအားလုံးသည်စွဲလမ်းမှု၏ထင်ရှားသောအမှတ်အသားဖြစ်သောပိုမိုညံ့သော prefrontal cortex လုပ်ဆောင်မှုကိုညွှန်ပြသည်။ ၎င်းကိုအသုံးပြုခြင်းကိုထိန်းချုပ်ရန်သို့မဟုတ်တွန်းအားကိုထိန်းချုပ်ရန်မစွမ်းနိုင်ခြင်းဖြစ်သည်။
oxytocin အချက်ပြအပေါ် putative ဩဇာလွှမ်းမိုးမှုနှင့်အတူ hypersexual ရောဂါအတွက် microRNA-4456 ၏ Hypermethylation-ဆက်စပ် downregulation: miRNA မျိုးဗီဇ၏ DNA methylation ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ (2019) hypersexuality (ညစ်ညမ်း / လိင်စွဲလမ်းမှု) ရှိသည့်ဘာသာရပ်များအပေါ်လေ့လာမှုကအရက်သမားများတွင်ဖြစ်ပွားနေသောသူများနှင့်သက်ဆိုင်သည့်ဗီဇလုပ်ငန်းထိန်းချုပ်မှုပြောင်းလဲမှုများကိုဖော်ပြထားသည်။ epigenetic အပြောင်းအလဲများသည်ချစ်ခြင်း၊ နှောင်ကြိုး၊ စွဲခြင်း၊ စိတ်ဖိစီးမှု၊ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလုပ်ငန်းဆောင်တာများတွင်အရေးကြီးသော oxytocin system နှင့်ဆက်စပ်သောမျိုးဗီဇများ၌ဖြစ်ပွားခဲ့သည်။
ချင်တဲ့ဒေါသစိတ်နဲ့ထိန်းချုပ်မှုနှင့်စွဲလမ်းမှုရောဂါများအတွက်မီးခိုးရောင်ကိစ္စအသံအတိုးအကျယ်ခြားနားချက်များ (Draps et al ။, 2020) ကောက်နှုတ်ချက်: ထိန်းချုပ်မှုနှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါကထိခိုက်ခံရသူများ၏လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူဆိုင်ရာရောဂါ (CSBD)၊ လောင်းကစားခြင်းနှင့်အရက်သုံးစွဲမှုရောဂါ (AUD)၊ ထိန်းချုပ်မှုနှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါကသေးငယ်သော GMVs ကိုပြသသည်။ အထူးသဖြင့် orbitofrontal cortex တွင်ဖြစ်သည်။ ညာဘက် anterior cingulate gyrus ရှိ GMV …ကျွန်ုပ်တို့၏တွေ့ရှိချက်များသည်တိကျသော Impulse Control Disorders နှင့်စွဲလမ်းမှုအကြားတူညီမှုကိုဖော်ပြသည်။
Hypersexual Disorder (အမျိုးသားများရှိ Plasma Oxytocin Levels) (၂၀၂၀) ကောက်နှုတ်ချက်: ရလဒ်အနေဖြင့် hypersexual disorder နှင့်အတူအမျိုးသားလူနာများအတွက် hyperactive oxytonergic system ကိုအကြံပြုသည်။ အောင်မြင်သော CBT အုပ်စုကုထုံးသည် hyperactive oxytonergic system အပေါ်အကျိုးသက်ရောက်နိုင်သည်။
ပုံမှန် Testosterone ဟော်မုန်းနှင့်မြင့်မားသော Luteinizing Hormone Plasma Levels (ယောက်ျားများတွင် Hypersexual Disorder) (2020) ကောက်နှုတ်ချက်: အဆိုပြုထားသောယန္တရားများတွင် HPA နှင့် HPG အပြန်အလှန်ဆက်သွယ်မှု၊ ဆုလာဘ်အာရုံကြောကွန်ယက်သို့မဟုတ် prefrontal cortex ဒေသများအားစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများထိန်းချုပ်မှုကိုတားဆီးခြင်းတို့ပါဝင်သည်။32 နိဂုံးချုပ်အနေဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်ကျန်းမာသောစေတနာ့ဝန်ထမ်းများနှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါက hypersexual အမျိုးသားများတွင် LH ပလာစမာအဆင့်မြင့်လာခြင်းကိုပထမဆုံးအကြိမ်တင်ပြခဲ့သည်။ ဤပဏာမတွေ့ရှိချက်များက neuroendocrine systems နှင့် HD တွင် dysregulation ပါဝင်ပတ်သက်မှုဆိုင်ရာစာပေများကိုကြီးထွားစေသည်။
တားဆီးထိန်းချုပ်ခြင်းနှင့်ပြproblemနာရှိသောအင်တာနက်ညစ်ညမ်းစာပေရုပ်ပုံများအသုံးပြုခြင်း - အင်ဆူလာ၏အရေးပါသောဟန်ချက်ညီမှုအခန်းကဏ္ ((၂၀၂၀) ကောက်နှုတ်ချက်: သည်းခံစိတ်နှင့်စိတ်ခွန်အားနိုးကြားမှုရှုထောင့်များ၏အကျိုးသက်ရောက်မှုများသည် interoceptive နှင့် reflective system ၏ differential activity နှင့်ဆက်စပ်သောမြင့်မားသောလက္ခဏာပြင်းထန်မှုရှိသူများအတွက်ပိုမိုကောင်းမွန်သော inhibitory control စွမ်းဆောင်ရည်ကိုရှင်းပြနိုင်သည်။ IP အသုံးပြုမှုအပေါ်ထိန်းချုပ်မှုလျော့နည်းလာခြင်းဟာထကြွလွယ်သော၊ ရောင်ပြန်ဟပ်မှုနှင့် interoceptive စနစ်များအကြားအပြန်အလှန်အကျိုးသက်ရောက်မှုကြောင့်ဖြစ်နိုင်သည်။
အောက်ပါအာရုံကြောဆိုင်ရာစိတ်ပညာလေ့လာမှုများသည်အထက်ပါ“ ဦး နှောက်” လေ့လာမှုများကိုထောက်ခံမှုပေးသည်။
2010 မှ 2014 ခုနှစ်စာတမ်းများ
ယောက်ျားတစ်ဦးလူနာနှင့်ရပ်ရွာနမူနာများတွင်အလုပ်အမှုဆောင် function ကိုနှင့် hypersexual အပြုအမူဆောင်ရွက်ချက်များအပေါ် self-အစီရင်ခံကွဲပြားခြားနားမှု (2010)
ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံအပြောင်းအလဲနဲ့အလုပ်လုပ်မှတ်ဉာဏ်စွမ်းဆောင်ရည် (2013) နဲ့နှောင့်ယှက်
ဆုံးဖြတ်ချက်-Making သဲသဲကွဲကွဲမရှိသောလက်အောက်တွင်နှင့်အတူလိင်ရုပ်ပုံထုတ်ယူခြင်း်ရောက်စွက်ဖက် (2013)
2014 မှ 2015 ခုနှစ်စာတမ်းများ
ဘာစွဲအတွက်သွယ်ဝိုက်အသင်းအဖွဲ့များ: ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများနှင့်အတူတစ်သွယ်ဝိုက်အစည်းအရုံးစမ်းသပ်ခြင်း၏ adapter ။ (2015)
2016 မှ 2017 ခုနှစ်စာတမ်းများ
ညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံနှင့်ဖွဲ့စည်းသင်ယူဘို့ပုဂ္ဂလဒိဋ္တဏှာပုံမှန်ဘာအသုံးပြုသူများ (2016) ၏နမူနာထဲမှာဘာစွဲဆီသို့သဘောထားတွေကိုခန့်မှန်းပြီး
အင်တာနက်ပေါ်ရှိညစ်ညမ်းစောင့်ကြည့်ပြီးနောက်စိတ်ဓါတ်များအပြောင်းအလဲများကိုအင်တာနက်ညစ်ညမ်း-ကြည့်ရှုရောဂါ (2016) ၏ရောဂါလက္ခဏာများနှင့်ဆက်စပ်နေပါသည်
လိင် Active ကိုတစ်ဦးချင်းတစ်ဦးအလိုက် (အတွင်းလိင်-Related စကားမှလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ compulsive နှင့်အာရုံကိုဘက်လိုက်မှုတို့အကြားဆက်ဆံရေး ExploringAlbery et al ။, 2017)
လိင် compulsive နှင့် Non-လိင် compulsive အမျိုးသားများ၏အလုပ်အမှုဆောင်လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ပုံခြင်းမပြုမီကာခေါ်ဆောင်သွားဗီဒီယို (2017) အကဲခတ်ပြီးနောက်
အင်တာနက် (ပြဿနာ) ကိုအသုံးပြုခြင်းများအတွက်ခန့်မှန်းလိင်အကဲဆတ်သောပစ္စည်း: လိင်အကဲဆတ်သောပစ္စည်းဆီသို့စရိုက်များလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ Motivation and Implicit ချဉ်းကပ်လိုတဲ့သဘောထားကို၏အခန်းက္ပ (2017)
အင်တာနက်ညစ်ညမ်း-အသုံးပြုမှုရောဂါဆီသို့သဘောထားတွေ: ညစ်ညမ်းလှုံ့ဆော်မှုဖို့အာရုံကိုဘက်လိုက်မှုနှင့် ပတ်သက်. အမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီးများတွင်ကွာခြားချက်များ (2018)
အင်တာနက်ညစ်ညမ်း-အသုံးပြုမှုရောဂါ (2018) ဆီသို့ဦးတည်စိတ်သဘောထားနှင့်အတူယောက်ျားအတွက်ရိုနှင့်ပြည်နယ် Impulse
Impulse နှင့်ဆက်စပ်ရှုထောင့်၏ရှုထောငျ့ကအင်တာနက်ညစ်ညမ်း (2019) ၏အပန်းဖြေခြင်းနှင့်စည်းကမ်းတအသုံးပြုမှုအကြားခွဲခြား
ထို့အပြင် porn အသုံးပြုမှုသည်ဆုလာဘ် circuit နှင့် prefrontal cortex အကြားပြတ်တောက်သောအာရုံကြောဆက်သွယ်မှုများနှင့်ဆက်နွယ်သည်။
အလုပ်မဖြစ် HPA ဝင်ရိုးနှင့်ပြောင်းလဲဦးနှောက်စိတ်ဖိစီးမှုဆားကစ်, အတွင်းမူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲမှုအတွက်ဖြစ်ပေါ်ရသော (နှင့်နာတာရှည်လူမှုရေးစိတ်ဖိစီးမှုနှင့်ဆက်နွယ်သော သာ. ကြီးမြတ် amygdala အသံအတိုးအကျယ်,) ။
ယာယီ cortex မီးခိုးရောင်အမှု၌တစ်ဦးကလိုငွေပြမှု, ယာယီကော်ပိုရေးရှင်းနှင့်အခြားဒေသများအကြားဆင်းရဲတဲ့ဆက်သွယ်မှု။
ကျန်းမာသန်စွမ်းထိန်းချုပ်မှုနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင် prefrontal cortex နှင့် anterior cingulate gyrus မီးခိုးရောင်ကိစ္စလျော့နည်းသွားသည်။
အင်တာနက် ညစ်ညမ်းရောဂါ လက္ခဏာ ရှိသော အမျိုးသားများ၏ ရာခိုင်နှုန်းများ၏ ခန့်မှန်းချက်ကို ကျွန်ုပ်တို့ မကမ်းလှမ်းသော်လည်း၊ အင်တာနက် ညစ်ညမ်းသည် ယခင်က porn ထက် အသုံးပြုသူ ရာခိုင်နှုန်း ပိုများနေပုံပေါ်ကြောင်း သတိပေးပါသည်။ အစောပိုင်းတွင်၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် လတ်တလော ရာနှင့်ချီသော အရေးဆိုမှုကို အခြေခံထားသည်။ အင်တာနက်စွဲ / အွန်လိုင်းဂိမ်းကစားလေ့လာမှုများ (အင်တာနက်ညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုအပါအဝင်အချို့) ။ သကဲ့သို့မြင့်မားသောစွဲအချို့သည်ပြပွဲရာခိုင်နှုန်း လေးယောက်အတွက်တဦးတည်း ငယ်ရွယ်အထီးအကြား။
ငယ်ရွယ်အထီးအင်တာနက်စွဲလမ်း၏အမြင့်နှုန်းထားများငယ်ရွယ် porn အသုံးပြုသူများကအင်တာနက်ကိုညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုနှင့်ဆက်စပ်နှစ်ဦးစလုံးပြဿနာများအလွန်ဘုံဖြစ်ကြောင်း, ဆိုလိုသည်မှာ, သူတို့ရဲ့ရွယ်တူအကြောင်းကိုသတင်းပို့သောအရာကို။ နှင့်ကိုက်ညီပါလိမ့်မယ် ၏မြင့်တက်လာ streaming များပြွန် porn sites များ ပုံလက္ခဏာပျံ့နှံ့ / ပြင်းထန်မှုအတွက်သော့ချက် variable ကိုဖြစ်ပါတယ်။ ကျနော်တို့ကအင်တာနက်ညစ်ညမ်းစွဲနှုန်းထားများတစ်နေ့နေ့မှာပြိုင်ဘက်အကြောင်းသံသယ အစားအသောက်စွဲလမ်း junk အစားအစာနှင့်အင်တာနက်ညစ်ညမ်းနှစ်ဦးစလုံးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့နှုန်းထားများများမှာ supernormal မူကွဲ လူ့ဦးနှောက်ကိုလိုက်ရန်ပြောင်းလဲနှစ်ခုချုပ်သဘာဝကဆုလာဘ်၏။ အရွယ်ရောက်ပြီးသူအမေရိကန်များထက်ပိုသုံးပုံနှစ်ပုံအဝလွန်နှင့်ထိုအဝလွန် (High-ဆီဥ, High-သကြားစွဲသူတို့ထဲကအများစုဟာအပိုငန်အစားအစာများ) ၏ထက်ဝက်ခန့်ရှိပါတယ်။
အင်တာနက် ညစ်ညမ်းမှု လေ့လာမှုများကို လျစ်လျူရှုပြီး အင်တာနက် ညစ်ညမ်းသုံးစွဲမှုကို ခွဲထုတ်သည့် လေ့လာမှုများကသာ (ပျံ့နှံ့မှုနည်းသော) လေ့လာမှုများကသာ ၎င်း၏တည်ရှိမှုကို သက်သေပြနိုင်သည်ဟု (ညစ်ညမ်းစွဲလမ်းသူများကဲ့သို့) အခိုင်အမာပြောဆိုခြင်းသည် သိပ္ပံနည်းကျမဟုတ်ပေ။ ပထမ၊ အင်တာနက် porn သည် ကျွန်ုပ်တို့၏ မွေးရာပါလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ ပရိုဂရမ်ကို နှိပ်လိုက်သော်လည်း၊ တစ်ဦး hyperstimulating လမ်းအတွက် (၎င်း၏ကြောင့် စဉ်ဆက်မပြတ်အသစ်အဆန်း), အင်တာနက်ညစ်ညမ်းမှုစွဲသည်အဓိကအားဖြင့်အင်တာနက်စွဲစွဲလမ်းမှုသည်အွန်လိုင်းဂိမ်းစွဲလမ်းမှုနှင့်အထွေထွေအင်တာနက်စွဲလမ်းမှုကဲ့သို့ဖြစ်သည်။ မြန်နှုန်းမြင့်အင်တာနက်မရှိလျှင်အင်တာနက်စွဲလမ်းမှုမရှိနိုင်ပါ။
ပထမ၊ လူငယ်အမျိုးသားများကြားတွင် ညစ်ညမ်းမဟုတ်သော အသုံးပြုသူများအုပ်စုများကို ထိန်းချုပ်ရန် အလွန်ခက်ခဲပါသည်။ ဒုတိယ၊ ကျင့်ဝတ်ဘုတ်အဖွဲ့များသည် အကျိုးသက်ရောက်မှုများကို လေ့လာရန်အတွက် နှစ်ပေါင်းများစွာ အပြင်းစား ညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုနှင့် ပတ်သက်သည့် အကြောင်းအရာတစ်ဝက်ကို ထိတွေ့ခွင့်မပြုပါ။ တတိယ၊ ကျင့်ဝတ်ပျဉ်ပြားညစ်ညမ်းအသုံးပြုသူများကိုနှိုင်းယှဉ်မှုအတွက်ဟောင်းသည်အသုံးပြုသူများကိုဖန်တီးရန်လကြာ porn မှတစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေပပျောက်ဖို့တောင်းနေကြသည်ရှိရာသုတေသနပြုခွင့်ပြုလိမ့်မည်မဟုတ်ပေ။
သုတေသနပြုချက်များအရ အင်တာနက်စွဲလမ်းခြင်း နှင့် အွန်လိုင်းဂိမ်းစွဲလမ်းခြင်းတို့သည် တည်ရှိနေကြသည် မဟုတ် အန္တရာယ်ကင်း, သက်သေများ၏ဝန်ထုပ်ဝန်ပိုးကိုအင်တာနက်ညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုထူးခြားအန္တရာယ်ကင်းပါလိမ့်မယ်ဘာကြောင့်သိပ္ပံနည်းကျအကြောင်းပြချက်ထုတ်ဖေါ်ဖို့ porn သံသယဝါဒီအပေါ်ယခုဖြစ်ပါတယ်။ (ကိုသတိပြုပါ ဒတ်ခ်ျသုတေသီများ ပြီးသားဆိုက်ဘာ erotica အလားအလာစွဲလမ်း, ဆိုလိုသည်မှာ, အရှိဆုံးဆွဲဆောင်မှုဖြစ်ပါသည်, အားလုံးဆိုက်ဘာ pastime ၏ပြသကြပါပြီ။ )
လိင်စိတ်အေးစေခြင်းနှင့် စွဲလမ်းခြင်းနှစ်မျိုးလုံးသည် ဆက်စပ်နေသည်။ ဆိုလိုသည်မှာ စွဲလမ်းမှုသည် ဦးနှောက်အတွင်းရှိ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ ထိန်းညှိပေးသည့် ယန္တရားကို ခိုးယူသွားခြင်းဖြစ်သည်။ ကြည့်ပါ။ သဘာဝနှင့်ဆေးဝါးဆုလာဘ်တစ်ခု Key ကိုအာမခံ (2013) အဖြစ်ΔFosBနှင့်အတူဘုံဦးနှောက်ကဲ့သို့ရှုပ်ထွေးသောပလပ်စတစ်ယန္တရားများအပေါ်ဥပဒေ
ယောက်ျားတွေအများကြီး porn-related လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစွမ်းဆောင်မှုနှင့်စွဲအဖြစ်မိမိတို့ကိုယ်ကိုရှုမြင်ကြဘူးတဲ့သူကတခြားပြဿနာတွေအစီရင်ခံရသည်။ (NoFap လုပ်နေတဲ့သူက“ စွဲလမ်းသူ” မဟုတ်ဘူးလား။) သူတို့တစ်နည်းနည်းနဲ့ရှိသည်သောသူတို့၏အတွေ့အကြုံ သူတို့ရဲ့လိင်သဘာ rewired ပင်စွဲလမ်းသို့ပြိုလဲဘဲလျက်မပါဘဲသုတေသနအပေါ်ကထောက်ခံနေသည် ကညာကြွက်များ။ High-arousal ပြည်နယ်များအသုံးပြုခြင်း, သိပ္ပံပညာရှင်များကိုအောင်မြင်စွာဇာတိပကတိအားဖြင့် (သာမန်အားဖြင့်ဆန္ဒရှိ) ပုပ်နဲ့တူအနံ့အဘယ်သူသည်လိင်တူချင်းမိတ်ဖက်များနှင့်မိတ်ဖက်ပိုနှစ်သက်ဖို့ငယ်ရွယ်ကြွက်အေးစက်ပါပြီ။ သုတေသီများကလည်းအစောပိုင်းလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအေးစက်ပုံမှန်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူပုံစံများကိုထူထောင်ကြသည်ပြီးနောက်လူကြီးများအတွက်သွေးဆောင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအေးစက်ထက်ပိုမိုကြာရှည်ခံကြောင်းပြသခဲ့ကြသည်။
မဖွယ်မရာညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကိုအသုံးပြုသူများသည်သူတို့၏ညစ်ညမ်းမှုကိုပိုမိုအသုံးပြုခြင်းကိုမကြာခဏဖော်ပြကြသည်။ ၎င်းသည် porn အမျိုးအစားအသစ်များကိုကြည့်ရှုရန်သို့မဟုတ်ရှာဖွေရန်အချိန်ပိုပေးသည်။ အံ့အားသင့်စရာ၊ အံ့အားသင့်စရာ၊ မျှော်လင့်ချက်များအားချိုးဖောက်ခြင်းသို့မဟုတ်စိုးရိမ်ပူပန်ခြင်းများကိုဖြစ်ပေါ်စေသောအမျိုးအစားအသစ်များသည်လိင်စိတ်နှိုးဆွမှုကိုတိုးပွားစေသည်။ အလွန်အကျွံအသုံးပြုမှုကြောင့်လှုံ့ဆော်မှုများကိုတုန့်ပြန်မှုနည်းပါးနေသောညစ်ညမ်းသုံးစွဲသူများတွင်ဤဖြစ်ရပ်သည်အလွန်ဖြစ်လေ့ရှိသည်။ Norman Doidge MD သည်ဤအကြောင်းကိုသူ့စာအုပ်တွင်ရေးသားခဲ့သည် ကိုယ်နှိုက်ကလည်းပြောင်းလဲဒါကဦးနှောက်:
လက်ရှိညစ်ညမ်းကပ်ရောဂါသည်လိင်ဆိုင်ရာအရသာများကိုရရှိနိုင်ကြောင်းပြသသည့်သရုပ်ပြမှုတစ်ခုပေးသည်။ မြန်နှုန်းမြင့်အင်တာနက်ဆက်သွယ်မှုများမှထုတ်ဝေသောညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေသည်အာရုံကြောဆိုင်ရာပြောင်းလဲမှုအတွက်လိုအပ်ချက်အားလုံးကိုကျေနပ်စေပါသည်။ ညစ်ညမ်းဓာတ်ပုံဆရာများသည်စာအိတ်အသစ်ကိုပိုမိုတင်းကျပ်စွာမိတ်ဆက်ပေးခြင်းအားဖြင့်မိမိတို့စာအိတ်ကိုတွန်းအားပေးနေသည်ဟုဝါကြွားကြသောအခါသူတို့ဖောက်သည်များကအကြောင်းအရာအပေါ်သည်းခံနိုင်မှုကိုတည်ဆောက်ပေးသောကြောင့်သူတို့မဖြစ်မနေပြောရမည်ဟုမဆိုလိုပါ။
ဒါကို back up လုပ်ဖို့အတွက် သုတေသနတွေရှိတယ်။ Kinsey သုတေသီ Bancroft နှင့် Janssen (“The Dual Control Model: The Role Of Sexual Inhibition & Excitation In Sexual Arousal And Behavior”) တို့သည် porn streaming တွင် ထိတွေ့မှုမြင့်မားကြောင်း ပထမဆုံး အစီရင်ခံတင်ပြခဲ့ကြပါသည်။“ vanilla sex” erotica နှင့်တုန့်ပြန်မှုအသစ်များလိုအပ်ခြင်းနှင့်တုန့်ပြန်မှုနည်းပါးခြင်းတို့ကြောင့်အချို့သောကိစ္စရပ်များတွင်နှိုးဆွရန်အထူးတိကျသောလှုံ့ဆော်မှုအမျိုးအစားများလိုအပ်သည်။"
တစ်ဦးက 2016 လေ့လာမှုကဖော်ပြခဲ့သည် တဝက် porn သုံးစွဲသူ "ယခင်ကစိတ်မဝင်စားသို့မဟုတ် repelling ဖွစျကွောငျးပစ္စည်း (ရန်မြင့်တက်အစီရင်ခံတင်ပြအွန်လိုင်းလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှုများ: ယောက်ျားတစ်နမူနာအတွက်ပြဿနာနှင့် Non-ပြဿနာအသုံးပြုမှုပုံစံများတစ်ခုကရေနံဓါတ်ငွေ့ရှာဖွေရေးလေ့လာမှု") ။ တစ်ဦးက 2017 လေ့လာမှု5လိင်ကွဲ-ဖော်ထုတ်လူတဦးတည်းအထီးလိင်တူချင်းအပြုအမူများညစ်ညမ်းကြည့်ရှုသတင်းပို့နှင့်ထို့ထက် ပို. လိင်တူချစ်သူ-ဖော်ထုတ်ယောက်ျား၏ထက်ဝက်ထက် "porn (အတွင်းလိင်ကွဲအပြုအမူကြည့်ရှုသတင်းပို့ကြောင်းတွေ့ရှိရအမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၌ဂေးတစ်ဦးနှိုင်းယှဉ်သုံးသပ်ခြင်း, ရိုးရိုးနှင့်လိင်ကွဲအမျိုးသားများ: လိင်အကဲဆတ်သောမီဒီယာလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအထောက်အထားအားဖြင့်အသုံးပြုခြင်း") ။ အဘယ်ကြောင့်တန်ခိုးတင်းမာမှုဖြစ်ပေါ်? "(ကင်းဘရစ်အာရုံကြောဆိုင်ရာသိပ္ပံပညာရှင်ပြဿနာ porn အသုံးပြုသူများကိုပိုမိုလျင်မြန်စွာပုံရိပ်တွေမှ habituate ကြောင်းသက်သေအထောက်အထားတွေ့ပြီနှင့်၎င်းတို့၏ဦးနှောက်ဝတ္ထုပုံရိပ်တွေပိုမို activation ပြသသောလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဆုလာဘ်မှအသစ်အဆန်း, အေးစက်နှင့်အာရုံကိုဘက်လိုက်မှု") ။
အချုပ်အားဖြင့်၊ အမျိုးမျိုးသောလေ့လာမှုများသည် ယခုအခါ ညစ်ညမ်းအသုံးပြုသူများအား အမျိုးအစားသစ်များ သို့မဟုတ် သည်းခံနိုင်မှုအဖြစ်သို့ တိုးမြင့်လာခြင်းအကြောင်း အထူးမေးမြန်းထားပြီး နှစ်ခုစလုံးကို အတည်ပြုခဲ့သည် (1, 2, 3, 4) ။ အမျိုးမျိုးသောသွယ်ဝိုက်နည်းလမ်းများအသုံးပြုခြင်း, နောက်ထပ် 50+ လေ့လာမှုများ တွေ့ရှိချက်များကို“ ပုံမှန်ညစ်ညမ်းသောအကျင့်” သို့မဟုတ်လေ့ကျင့်ခန်းများပိုမိုကိုက်ညီမှုရှိခြင်းနှင့်အစွန်းရောက်။ ပုံမှန်မဟုတ်သောအမျိုးအစားများသို့တိုးပွားလာခြင်းနှင့်ကိုက်ညီမှုရှိကြောင်းတွေ့ရှိရသည်။
ညစ်ညမ်းမှုဖြစ်စေသော လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ ကမောက်ကမဖြစ်မှုများသည် လိင်စိတ်အေးစေခြင်း၏ အယုံကြည်ရဆုံး ညွှန်ပြချက်ဖြစ်သည်။ 2010 ခုနှစ်ကတည်းက လူငယ်အမျိုးသားလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကို အကဲဖြတ်သည့် လေ့လာမှုများက သမိုင်းဝင် လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ ကမောက်ကမဖြစ်မှုအဆင့်များကို အစီရင်ခံပါသည်။ ၎င်းတို့သည် အခြားသော ကပ်ဆိုးများ၏ ထိတ်လန့်ဖွယ်ရာ နှုန်းများကို ပြသသည်- လိင်ချင်စိတ် နည်းပါးသည်။ ဒီ Lay ဆောင်းပါးထဲမှာမှတ်တမ်းတင် နှင့်7အမေရိကန်ရေတပ်ဆရာဝန်များပါဝင်သောဒီ peer-ပြန်လည်သုံးသပ်စက္ကူအတွက် - အင်တာနက်ကိုညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလုပ်မဖြစ်စေသလဲ? လက်တွေ့အစီရင်ခံစာများနှင့်အတူတစ်ဦးကိုပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်း (2016)
မကြာသေးမီက လေ့လာမှုများတွင် လိင်အင်္ဂါချို့ယွင်းမှုနှုန်းသည် 14% မှ 35% အထိရှိသည်။ လိင်စိတ်နည်းပါးသော (hypo-လိင်ဆက်ဆံမှု) အတွက် နှုန်းထားများမှာ 16% မှ 37% အထိ ရှိပါသည်။ လေ့လာမှုအချို့တွင် ဆယ်ကျော်သက်များနှင့် အသက် 25 နှစ်အောက် အမျိုးသားများ ပါဝင်ပြီး အခြားလေ့လာမှုများတွင် အသက် 40 နှင့် အောက် အမျိုးသားများ ပါဝင်ပါသည်။
ရှိပါတယ် 40 ကျော်လေ့လာမှုများ porn အသုံးပြုမှု / လိင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပြဿနာများစွဲခြင်းနှင့်နိမ့် arousal လင့်ထားသည် လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုံ့ဆော်မှုရန်။ သင်တန်းသားများကိုညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုကိုဖယ်ရှားပစ်ခြင်းနှင့်နာတာရှည်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလုပ်မဖြစ်အနာကိုငြိမ်းစေအဖြစ်စာရင်းထဲတွင်ပထမဦးဆုံး7လေ့လာမှုများ, causation ဆန္ဒပြခဲ့ကြသည်။
အထက်ပါလေ့လာမှုများအပြင်, ဒီစာမျက်နှာ 150 ကျွမ်းကျင်သူများကကျော်အားဖြင့်ဆောင်းပါးများနှင့်ဗီဒီယိုများကိုပါရှိသည် အသိအမှတျပွုနှင့်အောင်မြင်စွာ porn-သွေးဆောင် ED နှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလိုဆန္ဒ၏ညစ်ညမ်း-သွေးဆောင်အရှုံးကုသကြသူ (urology ပါမောက္ခ, ဆီးရောဂါပါရဂူ, စိတ်ရောဂါကုဆရာဝန်, စိတ်ပညာရှင်, sexologists, MDS) ။
အဘယ်အရာကိုညစ်ညမ်းစွဲ debunk ကြောင့်အာရုံကြောလေ့လာမှုများကော?
တာဝန်သိလေ့လာမှုများက ညစ်ညမ်းစွဲလမ်းမှုကို "ဖျက်ထုတ်ခြင်း" ဟုဆိုခြင်းမရှိပါ။ (ဘာကြောင့်လဲ ဆိုတာ ဖတ်ကြည့်ပါ။ ဤစာတမ်းဘာမျှမမှားယွင်းစေရန်လုပ်ဆောင်ခြင်း). ဤစာမျက်နှာကို အင်တာနက် ညစ်ညမ်းအသုံးပြုသူများ၏ ဦးနှောက်ဖွဲ့စည်းပုံနှင့် လုပ်ဆောင်ချက်များကို အကဲဖြတ်သည့် လေ့လာမှုအားလုံးကို စာရင်းပြုစုထားသည်။ ဤစာမျက်နှာ၏ဤတည်းဖြတ်မှုအရ၊ လေ့လာမှုတစ်ခုစီမှလွဲ၍တစ်ခုစီသည် ညစ်ညမ်းစွဲလမ်းမှုပုံစံအတွက် ပံ့ပိုးမှုပေးပါသည်။ သို့သော်လည်း၊ ညစ်ညမ်းစွဲလမ်းမှုကို ငြင်းဆိုထားသော ဆောင်းပါးတစ်ပုဒ်သည် လေ့လာမှုတစ်ခုအား ကိုးကားသည့်အခါတိုင်း၊ Nicole Prause ၏ EEG လေ့လာမှုနှစ်ခုထဲမှ တစ်ခု သို့မဟုတ် Prause၊ Ley နှင့် Finn တို့၏ တာဝန်မဲ့ "ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း" ကို သင်တွေ့ရှိလိမ့်မည်ဟု မျှော်လင့်ပါသည်။ ဤတွင် ၎င်းတို့သည် လွယ်ကူသော ကိုးကားချက်ဖြစ်သည်။
Leကရာဇ်မင်း၌အဝတ်အစားမရှိ - ဒေးဗစ်လလေ၊ နီကိုးလ်ပရာ့စ်နှင့်ပီတာဖင်န်တို့၏ 'အပြာစာပေစွဲလမ်းမှုပုံစံ' ကိုပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်း (Ley et al ။ , 2014)
Kinsey Institute မှ grad နီကိုးလ် Prause လေ့လာမှု ၁ နှင့် ၂ တွင် ဦး ဆောင်ရေးသားသူနှင့်ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူဖြစ်ပြီးစာတမ်း (၃) တွင်ဒုတိယရေးသားသူဖြစ်သည်။ Prause ရဲ့ ၂၀၁၅ EEG လေ့လာမှုနဲ့စတင်ကြပါစို့ (Prause et al ။ , 2015)။ Nicole Prause ကသူမ၏ SPAN ဓာတ်ခွဲခန်းဝက်ဘ်ဆိုက်တွင်ဤဆိတ်ငြိမ်လေ့လာမှုသည်ညစ်ညမ်းသောစွဲလမ်းမှုကိုဖယ်ရှားပေးသည်ဟုရဲရင့်စွာပြောဆိုခဲ့သည်။ မဟုတ်ပါ။
ထိန်းချုပ်မှုနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်ပိုမိုမကြာခဏ porn အသုံးပြုသူများကရှိခဲ့ အနိမ့် vanilla ညစ်ညမ်းဓါတ်ပုံများကိုတစက္ကန့်နှင့်ထိတွေ့ရန်ဦးနှောက်ကို Activation ။ ဤစာတမ်းတွင်ဖော်ပြခဲ့သည်ကြောင့်, နည်းသော သာ. ကြီးမြတ် porn ကိုအသုံးပြုခြင်းနှင့်ဆက်စပ်သော vanilla porn (ဓာတျပုံ) မှဦးနှောက်ကို Activation ကြောင့်နာတာရှည် porn အသုံးပြုမှုကိုနှိမ့်ချလိင်စိတ်နိုးထထိန်းညှိသောအယူအဆထောက်ခံပါတယ်။ ရိုးရှင်းစွာ ထား. , နာတာရှည် porn အသုံးပြုသူများကိုဟို-hum porn ၏ငြိမ်ပုံရိပ်တွေအားဖြင့်ပျင်းခဲ့ကြသည်။ အပြိုင်၎င်း၏တွေ့ရှိချက် Kuhn & Gallinat ။ , 2014 နှင့်သည်းခံစိတ်, စွဲ၏လက္ခဏာသက်သေနှင့်ကိုက်ညီဖြစ်ကြသည်။ သည်းခံစိတ်ကိုလူတစ် ဦး ၏မူးယစ်ဆေးဝါး (သို့) လှုံ့ဆော်မှုများကိုတုံ့ပြန်မှုမှေးမှိန်လာခြင်းအဖြစ်ထပ်ခါတလဲလဲအသုံးပြုခြင်း၏ရလဒ်အဖြစ်သတ်မှတ်သည်။ ရွယ်တူချင်းပြန်လည်သုံးသပ်သည့်စာတမ်း ၁၀ ခုသည် YBOP ၏အကဲဖြတ်ချက်ကိုသဘောတူသည် Prause et al ။, 2015: ၏ peer-ပြန်လည်သုံးသပ်ဝေဖန်မှု Prause et al။ , 2015
"ကံမကောင်းစွာ၏ရဲရင့်ခေါင်းစဉ် Prause et al ။ (၂၀၁၅) ဆောင်းပါးသည်မီဒီယာအပေါ်အကျိုးသက်ရောက်ခဲ့ပြီးသိပ္ပံနည်းကျမမျှတသောနိဂုံးကိုလူသိများစေသည်။
ပတျဝနျးကငျြဟာတခုခုဖြစ်နေတာကြောင့်မလိုလားအပ်တဲ့ဒဏ္ဍာရီဖြေရှင်းရန် Prause et al။ ၂၀၁၅ နှင့်လေ့လာမှုတိုင်းကိုလျစ်လျူရှုသော်လည်း Prause's နှင့်ဆောင်းပါးများစွာတို့သည် YBOP မှဤသို့ရေးသားခဲ့သည် - ဘက်လိုက်ဆောင်းပါးများအသိအမှတ်မပြုဖို့ကိုဘယ်လို: သူတို့ကကိုးကား Prause et al။ porn စွဲ (ဧပြီ, 2015) ထောက်ပံ့ 40 အာရုံကြောလေ့လာမှုများကျော်ချန်လှပ်စဉ် 2016, (မဟုတ်မမှန်က porn စွဲ debunks ဟုဆိုကာ)
ကျနော်တို့ပြီးသားကြောင်းလေ့လာမှု #2 (Prause အထက်တွင်ကိုမြင်လျှင် et al ။, 2015) ကိုညစ်စွဲမော်ဒယ်မှထောက်ခံမှုချေးငှားသည်။ ဒါပေမယ့် Prause ရဲ့ ၂၀၁၃ EEG လေ့လာမှုကိုဘယ်လိုလုပ်ခဲ့သလဲ (သံမဏိ et al ။ , 2013), မွှမ်းတင် မီဒီယာ သက်သေအထောက်အထားအဖြစ် ဆန့်ကျင် porn စွဲ၏တည်ရှိမှု, အမှန်တကယ် porn စွဲမော်ဒယ်ကိုထောကျပံ့?
ဒီလေ့လာမှုက သာ သိသာထင်ရှားသောတွေ့ရှိချက်တစ်ဦးချင်းစီနှင့်အတူနေခဲ့တာ porn ပိုမို cue-reactivity ကို ခဲ့ မိတ်ဖက်တစ် ဦး နှင့်လိင်ဆက်ဆံလိုစိတ်နည်းသည်။ သူတို့ကညစ်ညမ်းရုပ်ကိုတစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေဖို့အလိုဆန္ဒမရှိကြပါဘူး။ နောက်တစ်နည်းပြောရလျှင် ဦး နှောက်ကိုပိုမိုတက်ကြွစေပြီးလိင်စိတ်ကိုပိုမိုနှစ်သက်သောသူများသည်တကယ့်လူတစ် ဦး နှင့်လိင်ဆက်ဆံခြင်းထက်ညစ်ညမ်းခြင်းကိုတစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေတတ်သည်။ ၎င်းသည်ဆေးစွဲသူများအတွက်မဟုတ်ဘဲကျန်းမာသောဘာသာရပ်များဖြစ်သည်။
လေ့လာမှုပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူနီကိုးလ်ပရာ့စ်ကမကြာခဏညစ်ညမ်းအသုံးပြုသူများသည်လိင်စိတ်ပိုမိုမြင့်မားကြောင်းပြောကြားခဲ့သည်။ သို့သော်လေ့လာမှု၏ရလဒ်များကအတော်လေးကွဲပြားခြားနားသောအရာတစ်ခုခုကိုပြောပါ။ Valerie Voon (နှင့်အခြားအာရုံကြောဆိုင်ရာသိပ္ပံပညာရှင် ၁၀ ဦး) မှရှင်းပြခဲ့သည့်အတိုင်း Prause ၏ ၂၀၁၃ အပြာများသည်လိင်နှင့်သက်ဆိုင်သောအစစ်အမှန်မိတ်ဖက်များနှင့်လိင်ဆက်ဆံလိုသည့်ဆန္ဒနှင့်အတူလိင်ဆက်ဆံမှုကိုပိုမိုတွေ့ရှိနိုင်ကြောင်းတွေ့ရှိချက်များကရှင်းပြသည် 2014 ဦးနှောက်စကင်ဖတ်စစ်ဆေးလေ့လာမှု porn စွဲအပေါ်။ ရိုးရိုးရှင်းရှင်းပြောရလျှင် ၂၀၁၃ ခုနှစ် EEG လေ့လာမှု၏တွေ့ရှိချက်များသည်ထောက်ခံမှုမရှိသော“ ပြိုကွဲခြင်း” ခေါင်းစီးများနှင့်လုံးဝမသက်ဆိုင်ပါ။ သက်တူရွယ်တူ - ပြန်လည်သုံးသပ်စာတမ်းများရှစ် Prause ရဲ့အဖွဲ့ကဒီအစောပိုင်းလေ့လာမှုနှင့်ပတ်သက်။ အမှန်တရားဖော်ထုတ်: ၏ peer-ပြန်လည်သုံးသပ်ဝေဖန်မှု သံမဏိ et al ။, 2013 (ကိုလညျးရှု ဒီကျယ်ပြန့် YBOP ဝေဖန်မှု) ။
လိင်စွဲလမ်းမအမြင်ရှိသူဒေါက်တာဂျွန်ဆင်, အဆိုပါ Prause အင်တာဗျူးအောက်မှာတစ်စက္ကန့်အချိန် commented:
သို့သော်လေ့လာမှုကပြသနာများရှိသူများအနေဖြင့်အွန်လိုင်း erotica အားကြည့်ရှုခြင်းအားမူးယစ်ဆေးစွဲသူများ၏ ဦး နှောက်မှတ်တမ်းတင်ခြင်းနှင့်မူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲသူများထံမှ ဦး နှောက်မှတ်တမ်းတင်ခြင်းနှင့်မူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲသူများမှ ဦး နှောက်မှတ်တမ်းတင်ခြင်းများနှင့်နှိုင်းယှဉ်ခြင်းမပြုပါ။ အုပ်စုသည်စွဲသူများ (သို့) မစွဲသူများ၏ ဦး နှောက်တုံ့ပြန်မှုများနှင့် ပို၍ ဆင်တူသည်။ ..
အထက်တွင်ဖော်ပြထားသောတတိယစာတမ်းသည်လုံးဝလေ့လာမှုမဟုတ်ပါ။ ၎င်းအစား၊ ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများသည်ညစ်ညမ်းသောစွဲလမ်းမှုနှင့်ညစ်ညမ်းသောအကျိုးသက်ရောက်မှုများကိုဘက်မလိုက်သော“ စာပေများကိုပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း” အဖြစ်တင်စားသည်။ အဘယ်အရာကိုမျှအမှန်တရားကနေဝေးကွာဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ဦး ဆောင်စာရေးသူ David Ley သည်စာရေးသူဖြစ်သည် လိင်စွဲလမ်း၏သွန်သင်ချက်အမှား။ နီကိုးလ် Prause သည်၎င်း၏ဒုတိယစာရေးဆရာဖြစ်သည်။ Ley & Prause သည်စက္ကူနံပါတ် (၃) ကိုရေးရန်သာမကအဖွဲ့တစ်ခုကိုလည်းရေးခဲ့သည် စိတ်ပညာယနေ့တွင် စက္ကူ #1 အကြောင်းကို blog post: ။ အဆိုပါ blog post:5လအတွင်းသည်ထင်ရှား ရှေ့မှာ Prause ၏စက္ကူကိုတရားဝင်ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေခဲ့သည်။ Ley ၏ blog post ကို oh-soy catchy ခေါင်းစဉ်ဖြင့်မြင်ဖူးပေလိမ့်မည် -Porn on Brain - ဒါကစွဲလမ်းစရာမရှိဘူး။ ” လီက ဘယ်သူလဲ။ Sexual Health Alliance (porn sexologists လိုလားသူများမှ လူများနေ) တွင် သူပါဝင်ခြင်းဖြင့် x-Hamster's Stripchat မှ လျော်ကြေးပေးသည်။လိင်နှင့် ညစ်ညမ်းစွဲလမ်းမှုကို ဇွဲရှိရှိ ငြင်းဆိုသည်။ သူသည် ညစ်ညမ်း-ပြန်လည်ရယူရေးဖိုရမ်များကို တိုက်ခိုက်သည့် ဘလော့ဂ်ပို့စ် 20 သို့မဟုတ် ထိုထက်မက ရေးသားခဲ့ပြီး ညစ်ညမ်းစွဲလမ်းမှုနှင့် ညစ်ညမ်းမှုဖြစ်စေသော ED ကို ပယ်ချခဲ့သည်။ သူသည် စွဲလမ်းမှုသိပ္ပံပညာရှင်မဟုတ်သော်လည်း လက်တွေ့စိတ်ပညာရှင်တစ်ဦးဖြစ်ပြီး Prause ကဲ့သို့ မည်သည့်တက္ကသိုလ် သို့မဟုတ် သုတေသနအဖွဲ့အစည်းနှင့်မျှ မသက်ဆိုင်ပါ။ Ley နှင့် Prause နှင့် ၎င်းတို့၏ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုများအကြောင်း ပိုမိုဖတ်ရှုပါ။ ဒီမှာ.
အောက်ဖော်ပြပါသည် Ley & Prause ၏“ ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း” တွင်ပါ ၀ င်သည့် shenanigans များအားလုံးကိုဖော်ပြသည့်စက္ကူ ၃ ၏ရှည်လျားသောခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှုဖြစ်သည်။ တစ်ဦးကပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်းနှင့်အမျှတစ်ဦးကအရိုးကျိုးရေးတဲ့နတ်သမီးပုံပြင် pose: အဆိုပါဧကရာဇ်အဘယ်သူမျှမအဝတ်အစားရှိထားသည်။ ၎င်းသည် မှားယွင်းစွာ တံဆိပ်တပ်ထားသော “သုံးသပ်ချက်” ကို လုံးဝဖျက်သိမ်းပြီး စာရေးဆရာများ၏ ကိုးကားထားသော သုတေသန၏ ဒါဇင်နှင့်ချီသော မှားယွင်းသောတင်ပြချက်များကို မှတ်တမ်းတင်ထားသည်။ Ley ပြန်လည်သုံးသပ်မှု၏ ထိတ်လန့်စရာအကောင်းဆုံးအချက်မှာ အနုတ်လက္ခဏာသက်ရောက်မှုများကို ဖော်ပြသည့် လေ့လာမှုများစွာကို ချန်လှပ်ထားခြင်းဖြစ်သည်။ ၎င်းတွင် ညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုနှင့် ဆက်စပ်သော သို့မဟုတ် ညစ်ညမ်းစွဲလမ်းမှုကို တွေ့ရှိသည့်အရာများ ပါဝင်သည်။
ဟုတ်တယ်၊ မင်းပြောတာမှန်တယ်။ “ရည်ရွယ်ချက်” သုံးသပ်ချက်တစ်ခုရေးရန် ရည်မှန်းနေစဉ်၊ Ley & Prause သည် ဆက်စပ်လေ့လာမှုများဖြစ်သောကြောင့် ရာနှင့်ချီသောလေ့လာမှုများကို ချန်လှပ်ထားခဲ့သည်။ ဘာလို့ထင်လဲ? "ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း" မတိုင်မီထုတ်ဝေသော porn ဆိုင်ရာလေ့လာမှုအားလုံးနီးပါးသည်ဆက်စပ်မှုရှိသည်၊ ၎င်းတို့ပင် ကိုပြု ကိုးကားခြင်း သို့မဟုတ် အလွဲသုံးစားလုပ်ခြင်း။ ညစ်ညမ်းရုပ်ရှင်နဲ့ အကြောင်းရင်းကို သက်သေပြဖို့ ခက်ပါတယ်။ သုတေသီများသည် အသုံးပြုသူများအား "ညစ်ညမ်းအပျိုစင်များ" နှင့် နှိုင်းယှဉ်ခြင်း သို့မဟုတ် အကျိုးသက်ရောက်မှုများကို နှိုင်းယှဉ်ရန်အတွက် ညစ်ညမ်းအကြောင်းအရာများကို အချိန်ကြာမြင့်စွာ ထားခြင်းဖြင့် နှိုင်းယှဉ်၍မရပါ။ ထောင်နဲ့ချီတဲ့ ယောက်ျားလေးတွေက ညစ်ညမ်းတွေကို ဖြတ်ပစ်လိုက်တယ်။ ဆန္ဒအလျောက် အမျိုးမျိုးသောဖိုရမ်များပေါ်မှာ။ သို့သော်ဤ quitters ရလဒ်များအရအင်တာနက်ညစ်ညမ်းမှုကိုဖယ်ရှားခြင်းသည်သူတို့၏ရောဂါလက္ခဏာများနှင့်ပြန်လည်နာလန်ထူမှုများတွင်အဓိကသော့ချက်ဖြစ်သည်ဟုဖော်ပြသည်။
သုတေသနပညာရှင် (Prause) သည် ၎င်းတို့၏ မမှန်မကန်လေ့လာမှုက ထောက်ခံထားသည့် ယူဆချက်တစ်ခုကို ချေဖျက်နိုင်ခဲ့ကြောင်း အခိုင်အမာဆိုခြင်းသည် မကြုံစဖူးပင်ဖြစ်ပါသည်။ မျိုးစုံအာရုံကြောလေ့လာမှုများ နှင့် သက်ဆိုင်ရာသုတေသနဆယ်စုနှစ်ပေါင်းများစွာ. ထို့အပြင်၊ ဘယ်တရားဝင်သုတေသီက သူမသည် ညစ်ညမ်းစွဲလမ်းမှုနှင့် ညစ်ညမ်းမှုဖြစ်စေသော ED ကို ဖယ်ရှားခဲ့ကြောင်း အဆက်မပြတ် တွစ်တာလုပ်မည်ဖြစ်သည်။ နီကိုးလ် Prause တစ်ဦးလဲဆင်နွှဲခဲ့ပါသေးတယ်တော်မူပြီးမှ, PIED debunking နှင့်အတူစွဲလမ်းနေသည် ဤပညာရပ်ဆိုင်ရာစာတမ်းကို နှစ်ပေါင်းများစွာ စစ်တိုက်သည်။ညစ်ညမ်းသောလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလုပ်မဖြစ်မှုများမှပြန်လည်ကောင်းမွန်လာသည့်လူငယ်များကိုတစ်ပြိုင်တည်းနှောင့်ယှက်ခြင်းနှင့်အသရေဖျက်ခြင်းများပြုလုပ်သည်။ စာရွက်စာတမ်းများကိုကြည့်ပါ။ ဂါယူဆပါသည် #1, ဂါယူဆပါသည် #2, အလက်ဇန်းဒါး Rhodes #1, အလက်ဇန်းဒါး Rhodes #2, အလက်ဇန်းဒါး Rhodes #3, နောဧသည်ဘုရားကျောင်း, အလက်ဇန်းဒါး Rhodes #4, အလက်ဇန်းဒါး Rhodes #5, အလက်ဇန်းဒါး Rhodes #6, အလက်ဇန်းဒါး Rhodes #7, အလက်ဇန်းဒါး Rhodes #8, အလက်ဇန်းဒါး Rhodes #9, အလက်ဇန်းဒါး Rhodes # 10, အဲလက်စ် Rhodes # 11, Gabe Deem & Alex Rhodes # 12 အတူတူ, အလက်ဇန်းဒါး Rhodes # 13, အလက်ဇန်းဒါး Rhodes #14, Gabe # 4, အလက်ဇန်းဒါး Rhodes #15.
ဒီမှာဘာတွေဖြစ်နေတာလဲ? သူမ၏ကိုယ်ပိုင်၀န်ခံချက်ဖြင့် Prause သည် ညစ်ညမ်းစွဲလမ်းမှုသဘောတရားကို ငြင်းပယ်သည်။ ဥပမာအားဖြင့်၊ တစ်ဦးထံမှကိုးကား မာတင် Daubney ဆောင်းပါး လိင် / ညစ်ညမ်းစှဲမှာ about:
“ လူတွေဘာကြောင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူတွေလုပ်ဖို့ရွေးချယ်တာလဲဆိုတာကိုလေ့လာခြင်း စွဲလမ်းမှုအနတ္တမမြွက်ဘဲPrause တစ်ဦးနှင့်အတူဟောင်းတစ်ဦးပညာသင်နှစ်ဖြစ်ပါသည် ရှည်လျားသောသမိုင်း စာရေးဆရာ, သုတေသီများ, ကုသ, သတင်းထောက်များကို, ပြန်လည်ထူထောင်ရေးအတွက်ယောက်ျား, ဂျာနယ်အယ်ဒီတာများ, မျိုးစုံအဖွဲ့အစည်းများ, နှင့်အင်တာနက်ညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုကနေပျက်ဆီးအထောက်အထားအစီရင်ခံရန်ဝံ့သူကိုအခြားသူများကနှောင့်ယှက်ခြင်းနှင့် defaming ၏။ သူမသည်ဖြစ်ပေါ်လာသော အဆိုပါညစ်ညမ်းစက်မှုလုပ်ငန်းနှင့်အတူအတော်လေးအဆင်ပြေနေဒီကနေ beseen နိုင်ပါတယ်အဖြစ် X-အဆင့်သတ်မှတ်ထားသည်ဝေဖန်သူများအဖွဲ့အစည်း (XRCO) ဆုအခမ်းအနား၏အနီရောင်ကော်ဇောပေါ်သူမ၏၏ပုံရိပ် (ညာဘက်အစွန်ဆုံး)။ (ဝီကီပီးဒီးယားအဆိုပါအဆိုအရ XRCO ဆုပေးပွဲ အမေရိကန်ကပေးတဲ့နေကြတယ် X-အဆင့်သတ်မှတ်ထားသည်ဝေဖန်သူများအဖွဲ့ နှစ်စဉ်အရွယ်ရောက်ပြီးသူဖျော်ဖြေရေးအတွက်အလုပ်လုပ်လူများနှင့်စက်မှုလုပ်ငန်းဆုစက်မှုလုပ်ငန်းအဖွဲ့ဝင်များအတွက်သီးသန့် reserved ပြသတစ်ခုတည်းသောအရွယ်ရောက်ပြီးသူဖြစ်ပါတယ်။).
ဒါဟာအစ Prause ရှိစေခြင်းငှါပုံပေါ် ဘာသာရပ်များအဖြစ်ရရှိသော porn အဆိုတော် အခြားညစ်ညမ်းစက်မှုလုပ်ငန်းအကျိုးစီးပွားအုပ်စုတစ်စုကတဆင့်, အ အခမဲ့ခွန်းညွန့်ပေါင်း။ FSC မှရရှိသောဘာသာရပ်များကိုသူမတွင်အသုံးပြုခဲ့သည် ငှားရမ်း - သေနတ်လေ့လာမှု ထိုအပေါ် အကြီးအကျယ်စှနျး နှင့် အလွန်စီးပွားဖြစ်ဖြစ်သော“ Orgasmic Meditation” အစီအစဉ် (FBI ကစုံစမ်းစစ်ဆေး နှိုက်နှိုက်ချွတ်ချွတ် အသိအမှတ်ပြုခြင်း BBC ဇာတ်လမ်းတွဲ “The Orgasm Cult”) ။ ချီးမွမ်းခြင်းကိုလည်းပြုလုပ်ခဲ့သည် မထောက်ပံ့တောင်းဆိုမှုများ အကွောငျး သူမ၏လေ့လာမှုများ၏ရလဒ်များကို နှင့်သူမ၏ လေ့လာရေးနည်းစနစ်များ။ ပိုပြီးစာရွက်စာတမ်းများအဘို့အတွေ့: နီကိုးလ် Prause သြဇာလွှမ်းမိုးမှုအတွက် Porn စက်မှုလက်မှုလုပ်ငန်းရှင်များအားဖြင့်ဖြစ်သနည်း
University မှသူမကိုလွတ်မြောက်ပြီးနောက်ရှည်လျားသောဆောင်းပါးများစွာသည် Prause ကို UCLA သုတေသီအဖြစ်ဆက်လက်ဖော်ပြခဲ့သည်။ သူမသည် 2015 ခုနှစ်အစပိုင်းကတည်းက မည်သည့်တက္ကသိုလ်မှ အလုပ်ခန့်ထားခြင်းမရှိသေးပါ။ နောက်ဆုံးတွင်၊ တက်ကြွသော Prause သည် လိင်စွဲလမ်းမှုနှင့် ညစ်ညမ်းစွဲလမ်းမှုဆန့်ကျင်ဘက်ဆိုင်ရာ သက်သေခံချက်ကို (အခကြေးငွေဖြင့်) ပေးအပ်ခဲ့ကြောင်း သိရှိရန် အရေးကြီးပါသည်။ Prause သည် သူမ၏ EEG လေ့လာမှုနှစ်ခု၏ ပံ့ပိုးမထားသော ညစ်ညမ်းစွဲလမ်းမှု နိဂုံးများမှ အကျိုးအမြတ်ရရှိစေရန် Prause မှ ၎င်း၏ဝန်ဆောင်မှုများကို ရောင်းချလိုက်ပုံရသည် (1, 2), 18 peer-ပြန်လည်သုံးသပ်ဆန်းစစ်ခြင်းများပြုလုပ်ထားခြင်းနှစ်ဦးစလုံးလေ့လာမှုများစွဲမော်ဒယ်ကိုထောကျပံ့ပြောပါသော်လည်း!
အကျိုးစီးပွားပဋိပက္ခ (ကော်မရှင်ဖွဲ့စစ်ဆေးရေးကိုထောက်ခံ) ဒါဝိဒျ Ley အသစ်ချည်းနှီးသက်သက်ဖြစ်ကြ၏။ ပထမဦးစွာ, ဒါဝိဒ်သည် Ley ဖြစ်ပါသည် ညစ်ညမ်းမှုနှင့် လိင်စွဲလမ်းမှုကို ဖယ်ရှားရန် Sexual Health Alliance မှ ပေးဆောင်ရခြင်းဖြစ်သည်။။ အဆံုးမှာ ဤ စိတ်ပညာယနေ့တွင် ဘလော့ဂ်ပို့စ် Ley သည်သူ၏န်ဆောင်မှုကို advertise:
2019 ခုနှစ်တွင် David Ley ၏ဝဘ်ဆိုဒ်ကသူ့အားကမ်းလှမ်းခဲ့သည်။ န်ဆောင်မှု "debunking" ကောင်းမွန်စွာလျော်ကြေးငွေ:
Ph.D ဘွဲ့ကိုဒေးဗစ်ဂျေလီသည်လက်တွေ့စိတ်ပညာရှင်ဖြစ်ပြီး၊ NM အခြေစိုက် Albuquerque အခြေစိုက်လိင်ကုထုံး၏ AASECT အသိအမှတ်ပြုကြီးကြပ်သူဖြစ်သည်။ သူသည်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုရှိကိစ္စရပ်များတွင်ကျွမ်းကျင်သောသက်သေအထောက်အထားနှင့်မှုခင်းဆိုင်ရာသက်သေခံချက်ကိုပေးခဲ့သည်။ ဒေါက်တာ Ley သည်လိင်စွဲလမ်းမှုကိုစွပ်စွဲခြင်းဆိုင်ရာကျွမ်းကျင်သူတစ် ဦး ဖြစ်သည်။ သူသည်ဤအကြောင်းအရာနှင့် ပတ်သက်၍ ကျွမ်းကျင်သောသက်သေအဖြစ်အသိအမှတ်ပြုခံရသည်။ သူသည်ပြည်နယ်နှင့်ဖက်ဒရယ်တရားရုံးများတွင်သက်သေထွက်ဆိုခဲ့သည်။
ဒုတိယအနေနှင့် Ley သည်လိင်နှင့်ညစ်ညမ်းသောစွဲလမ်းမှုကိုငြင်းပယ်သောစာအုပ်နှစ်အုပ်ရောင်းချခြင်းဖြင့်ငွေရှာသည်။ သူတို့က "လိင်စွဲလမ်း၏သွန်သင်ချက်အမှား, "(2012) နှင့်"Dick များအတွက်ကျင့်ဝတ်ဆိုင်ရာ Porn,"(2016) ။ Pornhub (porn giant MindGeek မှပိုင်ဆိုင်သည်) သည်စာရင်းဖုံးကွယ်ထားသောထောက်ခံချက်ငါးခုအနက်တစ်ခုဖြစ်သည်။ Ley ရဲ့ 2016 စာအုပ် porn နှင့် ပတ်သက်. :
"David Ley ရဲ့အသံကဒီနေ့ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေနဲ့ပတ်သက်တဲ့အရေးအကြီးဆုံးစကားဝိုင်းအချို့ကိုလိုအပ်နေသောစိတ်အနှောက်အယှက်ဖြစ်စေပါတယ်။ "ornPornhub
တတိယ, ဒါဝိဒ်သည် Ley မှတဆင့်ပိုက်ဆံစေသည် ကျဲအိုနှီးနှောဖလှယ်ပွဲအဘယ်မှာရှိသူသည်မိမိနှစ်ခုစာအုပ်များ (ရာမဆငျမခွ (ထဲမှာထွက်သတ်မှတ်စွဲလမ်း-deniers '' သဘောတရားအားပေးအားမြှောက်?) လေ့လာမှုများများစွာနှင့်အသစ်များ၏အရေးပါမှုကိုလျစ်လျူရှု compulsive လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ Disorder ရောဂါ ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့၏ ရောဂါရှာဖွေရေးလက်စွဲတွင်)။ လီသည် ညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုနှင့်ပတ်သက်ပြီး ၎င်း၏ဘက်လိုက်သောအမြင်များပါဝင်သည့် သူ၏ဟောပြောချက်များစွာအတွက် လျော်ကြေးပေးသည်။ ဤ 2019 တင်ဆက်မှုတွင် Ley သည် ဆယ်ကျော်သက်အရွယ် ညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုကို ပံ့ပိုးရန်နှင့် မြှင့်တင်ရန် ထင်ရှားခဲ့သည်- အပြုသဘောဆောင်သောလိင်နှင့်ပြုစုပျိုးထောင်ခြင်းအတွက်တာဝန်ရှိညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံအသုံးပြုမှုဖွံ့ဖြိုးဆဲ.
စတုတ္ထအချက်မှာ David Ley သည် သွယ်ဝိုက်သောနည်းဖြစ်သည်။ ညစ်ညမ်းလုပ်ငန်းကြီး xHamster မှ လျော်ကြေးပေးသည်။ Sexual Health Alliance မှတဆင့် ၎င်းတို့၏ ဝဘ်ဆိုဒ်များကို မြှင့်တင်ရန် (ဆိုလိုသည်မှာ StripChat) နှင့်ညစ်ညမ်းစွဲခြင်းနှင့်လိင်စွဲလမ်းဒဏ္ဍာရီဖြစ်ကြောင်းသုံးစွဲသူများကစည်းရုံးသိမ်းသွင်းရန်! ဘယ်လိုသတိထားမိ Ley xHamster ဖောက်သည်ကိုပြောပြမယ့် “ဆေးဘက်ဆိုင်ရာလေ့လာမှုများက ညစ်ညမ်း၊ ကင်မရာရိုက်ခြင်းနှင့် လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကိစ္စများအကြောင်း အမှန်တကယ်ပြောသည်”။ ဒါတွေအားလုံး သူရှိနေတုန်းပဲ။ နှောင့်ယှက် နှင့် defaming အင်တာနက်ညစ်ညမ်းရဲ့ဖြစ်နိုင်ချေအနုတ်လက္ခဏာသက်ရောက်မှုနှင့် ပတ်သက်. ဖွင့်မပြောတတ်တဲ့သူတစ်ဦးချင်းစီနှင့်အဖွဲ့အစည်းများ။ ပိုပြီးမြင်ဘို့: ဒါဝိဒ်သည် Ley ယခုယင်း၏ဝက်ဘ်ဆိုက်များမြှင့်တင်ရန်နှင့်ညစ်ညမ်းစွဲခြင်းနှင့်လိင်စွဲလမ်းဒဏ္ဍာရီဖြစ်ကြောင်းသုံးစွဲသူများကစည်းရုံးသိမ်းသွင်းရန် porn စက်မှုလုပ်ငန်းကုမ္ပဏီကြီး xHamster နေဖြင့်လျော်ကြေးငွေခံရနေပါသည်!
(ဧပြီ၊ 2019)။ မှုအတွက်လက်တုံ့ပြန်ခုနှစ်တွင် ၎င်းတို့၏စာတမ်းများ critiquingလက်တစ်ဆုပ်စာစာရေးဆရာများ (Prause နှင့် Ley အပါအဝင်) သည် ၎င်းတို့၏ဝေဖန်သူများကို နှုတ်ပိတ်ရန်ကြိုးပမ်းမှုဖြင့် YBOP ၏အမှတ်တံဆိပ်ကိုခိုးယူရန် အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ကိုဖွဲ့စည်းခဲ့သည်။ အသေးစိတ်အချက်အလက်များအတွက် ဤစာမျက်နှာကိုကြည့်ပါ- Porn စွဲ Deniers (www.realyourbrainonporn.com) ကလဲဆင်နွှဲခဲ့ပါသေးတယ်ရန်လိုအမှတ်တံဆိပ်ချိုးဖောက်မှု။ ဤအုပ်စုများ၏ 'သုတေသနစာမျက်နှာ' တွင်ပြည့်စုံသောစာမေးပွဲအတွက်ဤစာမျက်နှာကိုကြည့်ပါ။ ယင်း၏ချယ်ရီ - ရွေးထားသောလေ့လာမှုများ၊ ဘက်လိုက်မှု၊ porn သိပ္ပံ Deniers မဟာမိတ်အဖွဲ့ (AKA: "RealYourBrainOnPorn.com" နှင့် "PornographyResearch.com").
အသရေဖျက်မှု၊ ကုန်အမှတ်တံဆိပ်နှင့် SLAPP ဝတ်စုံများ
(နွေရာသီ၊ ၂၀၀၉): မေလ 8, 2019 တွင် Donald ဟီလ်တန်, MD တစ်ဦးအသရေဖျက်မှုတင်သွင်း se နှုန်း ရုံးတင်စစ်ဆေးမှု နီကိုးလ် Prause & Liberos LLC ဆန့်ကျင်။ ဇူလိုင်လ 24, 2019 တွင် Donald ဟီလ်တန်ကသူ့အသရေဖျက်မှုတိုင်ကြားချက်ပြင်ဆင် (၁) တက္ကဆက်ပြည်နယ်ဆေးဘက်ဆိုင်ရာစစ်ဆေးသူဘုတ်အဖွဲ့မှတိုင်ကြားချက်၊ (၂) ဒေါက်တာဟီလ်တန်သည်သူ၏အထောက်အထားများကိုမဟုတ်မမှန်စွပ်စွဲခြင်းနှင့် (၃) အလားတူအနှောင့်အယှက်ပေးခြင်းနှင့်အသရေဖျက်မှုကျူးလွန်ခဲ့သည့်အခြား ၉ ခုမှဝေဖန်မှုများ။ယောဟနျသ Adler, MD, ဂယ်ရီ Wilson က, အလက်ဇန်းဒါး Rhodes, Stacy အညွှန့်, LICSW, Linda Hatch, Ph.D, Bradley အစိမ်းရောင်, Ph.D, Stefanie Carnes, Ph.D, Geoff Goodman, Ph.D, Laila Haddad.) အမှုကိစ္စ 2021 ခုနှစ်တွင် ပြေလည်သွားသောအခါ၊ Prause ၏ တာဝန်ယူမှုအာမခံကုမ္ပဏီသည် ပမာဏများစွာ ပေးဆောင်ခဲ့သည်ဟုသာ ကျွန်ုပ်တို့ ခန့်မှန်းနိုင်ပါသည်။
(အောက်တိုဘာ၊ 2019)။ အောက်တိုဘာလ 23, 2019 Alexander Rhodes (တည်ထောင်သူ reddit / nofap နှင့် NoFap.com) သည်အသရေဖျက်မှုဖြင့်တရားစွဲဆိုခဲ့သည် နီကိုးလ် R ကိုချီးမွမ်း နှင့် Liberos LLC။ ယင်းကိုကြည့်ပါ ဒီမှာတရားရုံးစာရင်း။ Rhodes မှတင်သွင်းသောမူလတန်းတရားရုံးစာရွက်စာတမ်းများအတွက်ဤစာမျက်နှာကိုကြည့်ပါ NoFap တည်ထောင်သူ Alexander Rhodes Nicole Prause / Liberos အားတရားစွဲဆိုမှု. ဒီအမှုကို 2021 ခုနှစ်မှာ ပြေလည်သွားတဲ့အခါ Prause ရဲ့ တာဝန်ယူမှုအာမခံကုမ္ပဏီက များပြားတဲ့ ပမာဏကို ထပ်ပြီးပေးချေတယ်လို့ပဲ ကျွန်ုပ်တို့ မှန်းဆနိုင်ပါတယ်။
(နွေရာသီ၊ ၂၀၀၉) တရားရုံး၏စီရင်ချက်များသည်နီကိုးလ်ပရာ့စ်အားပြစ်မှုကျူးလွန်သူအဖြစ်မဟုတ်ဘဲပြစ်မှုကျူးလွန်သူအဖြစ်ဖော်ထုတ်ခဲ့သည်. 2020 ခုနှစ် မတ်လတွင်၊ Prause သည် လုပ်ကြံဖန်တီးထားသော “အထောက်အထား” နှင့် ပုံမှန်လိမ်ညာမှုများ (ငါ့ကို လှည့်စားနေသည်ဟု မဟုတ်မမှန်စွပ်စွဲသည်) ကိုအသုံးပြု၍ ငါ့ကိုဆန့်ကျင်သည့် အခြေအမြစ်မရှိသော ယာယီတားမြစ်မိန့် (TRO) ကို တောင်းဆိုခဲ့သည်။ တားမြစ်မိန့်အတွက် Prause ၏တောင်းဆိုမှုတွင် သူမသည် ကျွန်ုပ်အား လက်ရှိတားမြစ်မိန့်တစ်ခု ရှိသည် (ထိုကဲ့သို့ အမိန့်ပေးရခြင်းမျိုး တစ်ခါမှမဖြစ်ဖူး) ဟု မိမိကိုယ်ကို လိမ်ညာပြောဆိုခဲ့သည်။ YBOP နဲ့ Twitter မှာ သူမရဲ့ လိပ်စာကို တင်ထားတယ်ဆိုတဲ့ တိုင်ကြားချက်ကြောင့် သူမရဲ့ အတုအယောင် တောင်းဆိုမှုကို သူမ အနားပေးခဲ့ပါ (မုသားသက်သေခံမှုသည် Prause တွင်အသစ်အဆန်းမဟုတ်ပါ) ပြီးတော့ သူမကိုရင်ဆိုင်ဖို့ ဂျာမနီမှာ စွဲလမ်းမှုကွန်ဖရင့်ကို တက်ခဲ့တယ် (သူမက ညီလာခံကို စာရင်းမသွင်းရသေးတဲ့ ဒါမှမဟုတ် ဖိတ်ကြားခြင်းမခံရပေမဲ့… မတက်ရောက်ခဲ့ဘူး)။ ကျွန်ုပ်သည် ကျွန်ုပ်အား အသံတိတ်ရန်နှင့် နှောင့်ယှက်ရန် တရားရေးစနစ် (TRO) ကို အလွဲသုံးစားလုပ်သည့်အတွက် Prause အား SLAPP ဆန့်ကျင်ရေးတရားစွဲဆိုထားသည်။ သြဂုတ်လ ၆ ရက်နေ့တွင်၊ လော့စ်အိန်ဂျလိစ်ကောင်တီ အထက်တန်းတရားရုံးမှ Prause သည် ကျွန်ုပ်အား တားမြစ်မိန့်ကို ရယူရန် ကြိုးပမ်းခဲ့ကြောင်း၊ (အများပြည်သူပါဝင်မှုကိုဆန့်ကျင်။ မဟာဗျူဟာမြောက်တရားစွဲဆိုမှု) (အများအားဖြင့်“ SLAPP ဝတ်စုံ”) ကိုဖွဲ့စည်းခဲ့သည်။. Prause သည် သူမ၏ လိမ်လည်လှည့်ဖြားမှု TRO တစ်လျှောက်လုံး လိမ်ညာခဲ့ပြီး၊ သူမအား ငါလိုက်ရှာခြင်း သို့မဟုတ် နှောင့်ယှက်ခြင်းဟု အကြမ်းဖျင်းပြောဆိုမှုများကို ထောက်ခံရန် အတည်ပြုနိုင်သော အထောက်အထား လုံးဝမရှိပါ။ အနှစ်သာရအားဖြင့် Prause သည် ကျွန်ုပ်အား အသံတိတ်စေရန် အနိုင်ကျင့်ပြီး လွတ်လပ်စွာ ပြောဆိုခွင့်ကို လျှော့ပေါ့စေရန် တားမြစ်မိန့်ကို အလွဲသုံးစားလုပ်ကြောင်း တရားရုံးက တွေ့ရှိခဲ့သည်။ ဥပဒေအရ၊ SLAPP စီရင်ချက်သည် ကျွန်ုပ်၏ရှေ့နေအခကြေးငွေကို ပေးဆောင်ရန် Prause တွင် တာဝန်ရှိသော်လည်း ဤတာဝန်ကို ရှောင်လွှဲရန်အတွက် သူမသည် ဒေဝါလီခံရန် လျှောက်ထားခဲ့သည်။
(စက်တင်ဘာလ, 2020) စက်တင်ဘာလ ၉ ရက်၊ ၂၀၂၀ တွင် Aaron Minc သည် JD ကိုတင်သွင်းခဲ့သည် တစ် ဦး အသရေဖျက်မှုဝတ်စုံကို Nicole Prause ရေးသားသော အသရေဖျက်သော တွစ်တာများကို ပြန်လည်လွှင့်တင်ခြင်းအတွက် Melissa Farmer နှင့် Nicole Prause ကို ဆန့်ကျင်သည်။ လယ်သမားက မြန်မြန် ပြေလည်သွားတယ်။ [အပ်ဒိတ်- Prause သည် သူမ၏ ကယ်လီဖိုးနီးယား ဒေဝါလီခံတရားသူကြီး Minc ၏တရားစွဲဆိုမှုကို အကာအကွယ်ပေးမည်ဟု မျှော်လင့်ခဲ့သော်လည်း အိုဟိုင်းယိုးပြည်နယ်တွင် ၎င်းအား ဆက်လက်ခွင့်ပြုခဲ့သည်။ စမ်းသပ်မှုများကို 2022 ခုနှစ်အတွက် စီစဉ်ထားပြီး 2021 ခုနှစ်နှောင်းပိုင်းတွင် Prause ၏ အဆိုကို ပယ်ချခဲ့ပြီး အိုဟိုင်းယိုးတရားသူကြီးမှ ပယ်ချခဲ့သည်။]
(ဇန်န၀ါရီ၊ ၂၀၂၁)။ ကျွန်ုပ်၊ Gary Wilson သည် ယခုအခါ RealYBOP URL ကို ပိုင်ဆိုင်သည် (ကုန်အမှတ်တံဆိပ်-စုန်းတင်ဆိုဒ် Prause ကို စီမံခန့်ခွဲပုံရသည်)။ သတင်းထုတ်ပြန်ချက်ကိုကြည့်ပါ- သတိပြုရန်: YBOP သည် www.RealYourBrainOnPorn.com ကိုကုန်အမှတ်တံဆိပ်ချိုးဖောက်မှုဖြေရှင်းခြင်းတွင်ရရှိသည်.
(ဇန်န၀ါရီ၊ ၂၀၂၁)။ Prause သည် ၂၀၂၀၊ ဒီဇင်ဘာလတွင်အသရေဖျက်မှုဖြင့်ကျွန်ုပ်ကိုပြစ်တင်ရှုတ်ချသည့်ဒုတိယတရားစွဲဆိုမှုကိုတင်သွင်းခဲ့သည်။ 2020 ဇန်နဝါရီလ 22 ရက်နေ့တွင်ကြားနာမှာ အော်ရီဂွန်တရားရုံးကကျွန်ုပ်၏မျက်နှာသာပေးမှုကိုစီရင်ပြီး Prause အားကုန်ကျစရိတ်များနှင့်ထပ်မံပြစ်ဒဏ်ချမှတ်ခဲ့သည်။ ဤသည်ပျက်ကွက်အားထုတ်မှုတစ် ဦး ဖြစ်ခဲ့သည် တစ်ဒါဇင်တရားစွဲမှု Prause သည် ယခင်လများတွင် လူသိရှင်ကြား ခြိမ်းခြောက်ပြီး/သို့မဟုတ် တိုင်ကြားခဲ့သည်။ အမြန်အကျဉ်းချုပ်ကိုကြည့်ပါ- အမှတ်စဉ် နှောင့်ယှက်သူ/တရားခံ Nicole Prause ထက် တရားဥပဒေအရ အောင်ပွဲများ။
နိုဝင်ဘာ၊ ၂၀၁၅ Nicole Prause ၏ တိကျသော မီဒီယာဖော်ပြချက်အချို့ကို ဖော်ပြပါရှိသည်။ “ NoFap မှ Porn စွဲမှုပံ့ပိုးမှုအဖွဲ့မှအဲလက်စ်ရော့ဒ်သည်ညစ်ညမ်းသောလိင်စိတ်ပညာရှင်အားတရားစွဲဆိုလိုက်သည်” ၏ Megan Fox ကဖြင့်ပြုလုပ်နိုင်ပါတယ် PJ မီဒီယာ နှင့် “ နို ၀ င်ဘာလတွင်ဖြစ်ပွားသောစစ်ပွဲများသည်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအရဖြစ်လာသည်”၏ဒိုင်ယာနာ Davison ဖြင့်ပြုလုပ်နိုင်ပါတယ် The Post Millennial။ Davison သည် Prause ၏ခွဲခြားဆက်ဆံမှုအပြုအမူနှင့်သူမ၏ပြောဆိုချက်များအတွက်သက်သေအထောက်အထားမရှိခြင်းအကြောင်းဤ ၆ မိနစ်ဗီဒီယိုကိုလည်းထုတ်လုပ်ခဲ့သည်။ "Porn စွဲလမ်းလား?"
သြဂုတ်လ 2020: ညစ်ညမ်းသောဆန့်ကျင်သူတစ် ဦး သည်တရားရုံးမှသူ့ကိုပိတ်ပစ်ရန်ကြိုးစားခဲ့သော 'porn prof' ကိုတရားဝင်အောင်နိုင်ခြင်းအကြောင်းအသေးစိတ်ဖော်ပြသည်။ (LifeSiteNews)
လေ့လာမှု ၅ ခုနောက်ကွယ်မှအမှန်တရားကိုဂယ်ရီ Wilson ကဖော်ထုတ်ပြသခြင်းသည် ၀ ါဒဖြန့်ချိသူများကညစ်ညမ်းသောစွဲလမ်းမှုမရှိခြင်း၊ ဂယ်ရီ Wilson - Porn သုတေသန: Fact သို့မဟုတ် Fiction (2018) ။
Porn Science ငြင်းပယ်မှုမဟာမိတ်အဖွဲ့ကိုသုတေသနစာမျက်နှာဟုခေါ်သည် (AKA -“ RealYourBrainOnPorn.com” နှင့်“ PornographyResearch.com”)
"Debunkingအဘယ်ကြောင့်ကျနော်တို့ဆဲ Porn အကဲခတ်အကြောင်းဒါကြောင့်စိုးရိမ်နေ Are? "မာတီ Klein, တေလာ Kohut နှင့်နီကိုးလ် Prause (2018) က
ဘက်လိုက်ဆောင်းပါးများအသိအမှတ်မပြုဖို့ကိုဘယ်လို: သူတို့ကကိုးကား Prause et al။ 20153တစ်ဒါဇင်ကျော် porn စွဲထောက်ပံ့အာရုံကြောလေ့လာမှုများချန်လှပ်စဉ်, (မဟုတ်မမှန်က porn စွဲ debunks ဟုဆိုကာ) ။
၏ဝေဖန်မှု: အယ်ဒီတာမှပေးစာ "Prause et al ။ (2015) ၏နောက်ဆုံးပေါ်မမှန်မကန်ပြုလုပ်မှု စွဲဟောကိန်းများ"(2016)
Justin Lehmiller ၏“ အငြင်းပွားမှုErectile အလုပ်မဖြစ်လူငယ်အမျိုးသားများအတွက်အတွက်ထအပေါ်တကယ်ပဲ Is"(2018)
Kris တေလာ၏“ ပြunkနာ”porn နှင့် erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှုနှင့် ပတ်သက်. အနည်းငယ်ခက်အမှန်တရားများ"(2017)
"Debunkingသငျသညျ porn-သွေးဆောင် erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှုစိတ်ပူဖြစ်သင့်?” - The Daily Dot's Claire Down မှပြုလုပ်သည်။ (၂၀၁၈)
Gavin Evans မှ“ အမျိုးသားများ၏ကျန်းမာရေး” ဆောင်းပါးကိုဖြုတ်ချသည် -“သင်က Erectile အလုပ်မဖြစ် Give လွန်း Porn အကဲခတ်နိုင်ပါသလား?"(2018)
ဘယ်လို porn သင့်ရဲ့ယောကျ်ားဘဝနှင့်အတူ messing ဖြစ်ပါတယ်ဖိလစ်ဇင်ဘာဒို၊ ဂယ်ရီ Wilson နှင့် Nikita Coulombe (မတ်လ၊ ၂၀၁၆)၊
porn နောက်ထပ်: သင်၏ယောကျ်ားဘဝတစ်မာတီ Klein တုံ့ပြန်စောင့်ရှောက်Philip Zimbardo & Gary Wilson (၂၀၁၆ Aprilပြီလ) မှ
ဤအပိုင်းသည် YBOP နှင့်အခြားသူများ၏သံသယရှိသောလေ့လာမှုများကိုစုဆောင်းသည် - မေးခွန်းထုတ်စရာ & အထင်မြင်မှားစေသောလေ့လာရေး။ အချို့သောနည်းစနစ်များသည်စိုးရိမ်မှုများကိုဖြစ်ပေါ်စေပြီးအခြားသူများတွင်မူနိဂုံးချုပ်အားလုံလောက်မှုမရှိဟုထင်ရသည်။ အခြားသူများအတွက်မူအမှန်တကယ်လေ့လာမှုရလဒ်အရအသုံးပြုသောခေါင်းစဉ်သို့မဟုတ်ဝေါဟာရသည်လှည့်စားနေသည်။ အချို့ကအမှန်တကယ်တွေ့ရှိချက်များကိုလုံးဝလွဲမှားစွာဖော်ပြခဲ့သည်။
Pingback: မင်း twitter မှာရှိနေရင် @YourBrainOnPorn (Gary Wilson) ကိုသေချာလိုက်နာပါ။ သူသည်သူ၏ ၂၀၁၂ Ted Talk နှင့်အံ့သြဖွယ် ၀ က်ဘ်ဆိုဒ်တို့ဖြင့်ဤလှုပ်ရှားမှု၏ Godfathers တစ် ဦး ဖြစ်ခဲ့သည်။ သူသည်ကြီးကျယ်သောတွစ်တာများ / အရင်းအမြစ်များ / သုတေသနများကိုဝေမျှပြီးသူ့အပေါ်ပိုချစ်သင့်သည်